စိတ်ကူးပျော်ရာ: July 2015
(၁)။ သူတကာ လောဘကြီးသော်လည်း မိမိက လောဘ မကြီးအောင်နေ။
ထိုသို့နေလျှင် သူတကာခေါင်းပါးခြင်း(ဒုဗ္ဘိက္ခအန္တရာယ်)ဘေးသင့်ရောက်သော်လည်း မိမိမှာ
(၂)။ သူတကာ ဒေါသကြီးသော်လည်း မိမိက ဒေါသမကြီးအောင်နေ။
ထိုသို့နေလျှင် သူတကာ လက်နက်ဘေးဆိုး (သတ္တန္တရကပ်)ဆိုက်ရောက်သော်လည်း
မိမိမှာ ထိုဘေးမှ လွတ်မြောက်မည်။
(၃)။ သူတကာ မောဟကြီးသော်လည်း မိမိက မောဟမကြီးအောင်နေ။
ထိုသို့နေလျှင် သူတကာ ရောဂါဘေးဆိုး(ရောဂန္တရကပ်)ဆိုက်ရောက်သော်လည်း
မိမိမှာ ထိုကပ်ဘေးမှ လွတ်မြောက်မည်။
မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး အမြဲမပြတ် ဆိုဆုံးမလေ့ရှိသော သြဝါဒ ဖြစ်သည်။
ယနေ့သည် ထိုသြဝါဒအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးရန် အချိန်တန်နေပြီဖြစ်၍ …
(၁)။ လောဘမကြီးရန် မိမိတတ်နိုင်သမျှ စွန့်ကြဲ ပေးကမ်း လှူဒါန်းပါ။
(၂)။ ဒေါသမကြီးရန် သတ္တဝါအားလုံးတို့အား မေတ္တာတရား ပွားများပို့သပါ။
(၃)။ မောဟမကြီးရန် ရုပ်နာမ်ဓမ္မ သင်္ခါရတို့၏ အနိစ္စ ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ သဘောကို
-【တိပိဋကဓရ၊တိပိဋကကောဝိဒ ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက ကျေးဇူးတော်ရှင် မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး】
❦လောဘထွန်းကားလာသဖြင့် ဆန်ရေစပါး ရှားပါး၍ အစားအစာ ငတ်မွတ်ခြင်းအား “ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ်”၊
❦ဒေါသလွန်ကဲသဖြင့် အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ကြသည့် လက်နက် ဘေးသင့်ခြင်း “သတ္တန္တရကပ်”၊
❦မောဟ လွန်ကဲသဖြင့် ရောဂါအမျိုးမျိုးကပ်ရောက်ခြင်း “ရောဂန္တရကပ်”ဆိုသော
●မောဟကြောင့် လေဘေးများ သင့်ရ၏။
“သီလနှင့် ပြည့်စုံသောသူ”မှာ ပြဆိုအပ်ပြီးသော ဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးမှ လွတ်မြောက် နိုင်ကြ၏။
-နတ်ပြည်သို့ တက်ရာတွင် သီလတည်းဟူသော စောင်းတန်း လှေကားဖြင့် တက်ကြရ၏။
-နိဗ္ဗာန်မြို့တော်ကြီးသို့ဝင်ရာ၌လည်း သီလ တည်းဟူသော တံခါးမှသာလျှင် ဝင်ရောက်နိုင်၏။
သီလနှင့် ပြည့်စုံ သောသူကား လူ့ပြည်ချမ်းသာ၊ နတ်ပြည်ချမ်းသာဟူသော ဝေဒယိတသုခ
လောကီချမ်းသာမျိုးကို မဆိုထားဘိ၊ လောကီချမ်းသာထက် မနှိုင်းယှဉ်နိုင်လောက်အောင်
သာလွန်ထူးမြတ်သော သန္တိသုခ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုပင် ရရှိနိုင်ပါပေ၏။
ထို့ကြောင့် ပစ္စက္ခဘဝ၌ပင်လျှင် ကပ်ကြီးသုံးပါးတို့မှ လွန်မြောက်လျက် နောင်တမလွန်ဘဝ၌
နတ်ပြည်ချမ်းသာ စသော လောကီ ချမ်းသာနှင့် အဆုံးဘဝ၌လည်း သန္တိသုခနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
ရရှိလိုကြသော ပညာရှိ သူတော်ကောင်းတို့သည် ချမ်းသာခြင်း၏ အရင်းမူလ ပဓာနဖြစ်သော
“သီလတရား” ကို ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ ။
-【စာရိုက်ပူဇော်သူ - Admin Team ofYoung Buddhist's Association】
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/31/2015 09:13:00 AM No comments:
အတွဲတွေ facebook နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုပြသနာတွေ တက်လေ့ရှိသလဲ
ချစ်သူစုံတွဲတွေ လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ facebook မှာ စုံတွဲဓာတ်ပုံတွေ တင်ကြတယ်၊ relationship status တင်ပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း စတေးတပ်စ်တွေ တင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကြားမှာ facebook ကြောင့် တက်တဲ့ ပြသနာတွေ အနည်းအများတော့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့သ၀န်တိုတတ်တဲ့ ချစ်သူတွေဆိုရင် ပိုလို့တောင် ဆိုးပါသေးတယ်။ facebook ကြောင့် ကွဲသွားတဲ့ ချစ်သူစုံတွေတွေလည်း ခုဆို တော်တော်များလာပြီလို့ စစ်တမ်းတွေအရ သိရပါတယ်။ ဒီတော့ ချစ်သူစုံတွဲတွေကြား facebook ကြောင့် ဘယ်လိုပြသနာလေးတွေ ဖြစ်တတ်သလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။
၁။ကိုယ့်ချစ်သူကို လာ add တဲ့သူ ဘယ်သူတွေလဲဆိုပြီး သိချင်ကြတယ်။ ပြသနာရှာကြတယ်။
နှစ်ယောက်စလုံး facebook သုံးနေတဲ့အချိန် ကိုယ့်ချစ်သူကို ဘယ်သူတွေ လာပြီး fri request ပို့ထားသလဲ။ ကိုယ့်အသိတွေလား။ အီစီကလီလုပ်မယ့်သူတွေလား စသဖြင့် သိချင်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် မိန်းကလေးဆိုလက်မခံနဲ့၊ ယောင်္ကျားလေးဆို လက်မခံရဘူး ဆိုပြီး ကိုယ့်ချစ်သူကို တားမြစ်ထားတာတွေတောင်ရှိလာပါတယ်။
၂။ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ account ထဲမှာ သူ့ရဲ့အရင်ရည်းစားဟောင်းတွေ ရှိနေသေးလား၊ သူတို့အဆက်အသွယ်ရှိနေသေးသလား ဆိုပြီး ပြသနာရှာကြတယ်။
ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူး။ သူငယ်ချင်းလိုပဲ ပြန်ခင်မင်နေတယ်ဆိုတာမျိုး လက်ခံပေးနိုင်တဲ့ ရည်းစားရှားပါတယ်။ အရင်ရည်းစားကိုယ့် account ထဲမှာရှိနေရင် သူဘာတွေလုပ်နေလဲ ဆိုတာလောက်တော့ နည်းနည်းပါးပါး သိချင်ကြတာရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ရည်းစားဟောင်းက ကိုယ့်ချစ်သူကို ပြန်လာပတ်သက်မှာ စိုးရိမ်တာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ဓာတ်ပုံမှာသာ သူ့ရည်းစားဟောင်းရဲ့ Like လေးတစ်ချက် တွေ့လိုက်ရင် ခေါင်းမီးတောက်ပြီး နှစ်ဦးသား ပြသနာတက်ပြီသာ မှတ်ပါတော့။
၃။chat ထဲမှာ ဘယ်သူတွေနဲ့ ဘာတွေပြောနေသလဲ သိချင်ကြတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်အလုပ်၊ ကိုယ့်ကျောင်း၊ ကိုယ်ဝါသနာပါရာ ကိစ္စရပ်တစ်ချို့ကြောင့် ကိုယ့်ကို မိတ်ဆွေလာဖွဲ့တာ၊ မေးမြန်းတာမျိုးတွေရှိနိုင်ပေမယ့် တစ်ချို့လူတွေကျတော့လည်း ဒီအတိုင်းရောချင်တာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကို ပြန်ပြောသင့်၊ မပြောသင့်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်သာ ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ ကိုယ့်ချစ်သူကတော့ မမြင်ကွယ်ရာမှာ သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ chat နေတာမျိုးသိရင် စိတ်ပူကောင်း စိတ်ပူပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် ဘာ့ကြောင့် chat ရတယ် ဆိုတာ၊ အကြောင်းကိစ္စရှိလို့ chat ရတယ်ဆိုတာ သူနားလည်အောင် ရှင်းပြပါ။ လာ hi တဲ့သူတိုင်းနဲ့တော့ စကားပြန်မပြောမိပါစေနဲ့။ သူ့ယုံကြည်မှုတွေလည်း မဆုံးရှုံးပါစေနဲ့။
၄။ကိုယ့်စတေးတပ်စ်၊ ဓာတ်ပုံတွေမှာ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ Like မရှိတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြသနာတက်ကြတယ်။
မိန်းကလေးအများစုဟာ ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ပုံလေးတွေ၊ စတေးတပ်ပ်လေးတွေမှာ ကိုယ်ချစ်သူက ၀င်လက်မထောင်တာမျိုး လိုချင်ကြပါတယ်။ သူတို့ထောက်ခံအားပေးတာကိုလည်း လိုချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲ သူ့ဘာသာသူသာ သပ်သပ်ကြီးနေပြီး လုပ်ချင်တဲ့ စတေးတပ်စ်တစ်ခုလောက်ကျမှ Like ကလစ်လေး လာနှိပ်တာမျိုးဆိုရင်တော့ သူတို့ စိတ်ကောက်ကြပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ချစ်သူကို ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း ရေသားထားတဲ့ စတေးတပ်စ်မျိုးမှာပေါ့။
၅။နှစ်ဦးသားရဲ့ထူးခြားတဲ့နေ့တွေမှာ တစ်ဦးရဲ့wall မှာ တစ်ဦးက အမှတ်တရပို့စ်တစ်ခုခု မလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြသနာတက်ကြတယ်။
facebook ပေါ်မှာ တစ်ခြားသော အတွဲပေါင်းများစွာက သူတို့ရဲ့အမှတ်တရဖြစ်တဲ့ နေ့လေးတွေမှာ တစ်ယောက်ရဲ့ wall တစ်ယောက်ဝင်ကြည့်၊ ပို့စ်လေးတွေ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီရေစီးကြောင်းထဲရောက်ပြီးလို့ကတော့ ပြန်ထွက်ဖို့ ခက်ခဲသွားပါပြီ။ ချစ်စခင်စ ကြင်နာစအချိန်တွေတုန်းက ခုလိုတွေလုပ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းခုလို လုပ်ဖို့ ပျက်ကွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်ဦးသား အချစ်တွေလျော့သွားပြီလားဆိုပြီး ပြသနာရှာတတ်ကြပါတယ်။
၆။ကိုယ့်ချစ်သူကို တစ်ခြားသူတွေရဲ့ အလှဓာတ်ပုံမှာ tag လုပ်ထားတာမျိုး မကျေမနပ်ဖြစ်တတ်ကြတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ကောင်မလေးတွေက သူတို့ရဲ့အလှဓာတ်ပုံတိုင်းမှာ ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးကို tag ပေးထားပြီး Like လုပ်ဖို့ပြောထားတာမျိုး တစ်ခါ၊ နှစ်ခါ မဟုတ် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မြင်တွေ့လာရပြီဆိုရင် ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးကိုရော၊ အဲ့ဒီကောင်မလေးတွေကိုပါ ဒေါသထွက်လာရပါပြီ။ ကိုယ့်ကောင်လေးအနေနဲ့လည်း သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံမှာ tag မလုပ်ဖို့ သူတို့ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောဖို့လိုလာပြီ ကိုယ့်ဘက်က ဖွင့်ဟလာရပါပြီ။
၇။ကိုယ်အမြင်မကြည်တဲ့သူရဲ့ပို့စ်၊ ဓာတ်ပုံအောက်မှာ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ Like တွေကို တွေ့လို့ ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။
လူမှုကွန်ယက်မှာ ကိုယ်နဲ့ချစ်သူ ၊ ခင်သူတွေ ရှိသလို ကိုယ်ကြည့်မရတဲ့၊ ကိုယ်နဲ့လုံးဝအဆင်မပြေတဲ့သူတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကို block လို့လည်းမရ၊ unfriend လုပ်လို့မကောင်းတာမို့ ဆက်ထားနေရပေမယ့် သူတို့တင်တဲ့ပို့စ်တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေကိုတော့ ကိုယ့်အနေနဲ့ Like မလုပ်ဖြစ်တော့တဲ့အခါ ကိုယ့်ချစ်သူကိုပါ ကိုယ့်လိုဖြစ်စေချင်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ချစ်သူကတော့ Like တွေ၊ comment တွေ ၀င်ရေးနေမယ်ဆို နှစ်ဦးသား ပြသနာတက်ပြီလို့သာ မှတ်လိုက်ပါတော့။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/31/2015 09:06:00 AM No comments:
ခေတ်မီဆေးပညာ၊ နည်းပညာနဲ့ နေ့ စဉ်အာဟာရ မှီဝဲမှုမှာ တိုးတက်လာမှုကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၁၅၀ အတွင်းမှာ လူ့ ပျှမ်းမျှသက်တမ်းဟာ နှစ်ဆပိုရှည်လာခဲ့ပါတယ်။ အသက်ပိုရှည်၊ ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ဒီအစားအစာတွေကို သင့်ရဲ့နေ့ စဉ်အစားအစာ တွေမှာ အချိုးကျ စားသုံးပေးဖို့ လိုပါတယ်။
၁။ ဗီတာမင် ဒီ
Telomeres လို့ ခေါ်တဲ့ ခရိုမိုဆုမ်းထိပ်အုပ်ကလေးတွေအကြောင်း သင်ကြားဖူးပါသလား။ သူ့ ရဲ့ အလျားပမာဏဟာ အသက်ရှည်မှုနဲ့ သက်ဆိုင်မှုရှိကြောင်း သက်သေပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နေရောင်၊ နို့ ထွက်ပစ္စည်းနဲ့ တူနာနဲ့ ဆယ်လ်မွန်ငါးတို့ လို အဆီပေါများတဲ့ငါး တွေမှာ ဗီတာမင် ဒီ ဓာတ်ပေါကြွယ်ဝပြီး ဗီတာမင်ဒီက ဒီ telomeres တွေရဲ့ အလျားပေါ်မှာ တိုက်ရိုက် အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ဗီတာမင်ဒီ များများစားလေ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ telomeres တွေ ပိုရှည်လေပါပဲ။
၂။ Antioxidants (ဓာတ်တိုးဆန့် ကျင်ပစ္စည်း)
ဓာတ်တိုးဆန့် ကျင်ပစ္စည်းဆိုတာ ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေပြီး အသက်အရွယ် အိုမင်းမှုကို လျော့ချပေးတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Polyphenols (ပိုလီဖီနော) လို့ ခေါ်တဲ့ antioxidant အမျိုးအစားက ထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ပြီး အော်ဂဲနစ်နည်းနဲ့ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ သဘာဝချောကလက် နဲ့ green tea တို့ မှာ ပါဝင်ပါတယ်။
၃။ Probiotics (ပရိုဘိုင်အောတစ်)
Probiotics (ပရိုဘိုင်အောတစ်) ဆိုတာ Probiotic bacteria (ပရိုဘိုင်အောတစ် ဗက်တီးရီးယား) အစာလမ်းကြောင်းမှာ ရှိနေကြတဲ့ ဗက်တီးရီးယားအကောင်းတွေနဲ့ Probiotic yeasts (ပရိုဘိုင်အောတစ် ယိစ်) တွေကိုခေါ်တယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းစေတယ်။ အထူးသဖြင့် အစာခြေရာမှာအသုံးကျတယ်။ ပရိုဘိုင်အောတစ် ပေါကြွယ်ဝတဲ့ အချဉ်ဖောက်၊ရှာလကာရည်စိမ်ထားတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးနဲ့ ဒိန်ချဉ် တို့ ကို စားသုံးပေးဖို့ လိုပါတယ်။
၄။ Vitamin B12
အာရုံကြောဆဲလ်၊ သွေးနီဥဆဲလ်နဲ့ DNA တို့ ထုတ်လုပ်ရာမှာ ပါဝင်ပြီး ဦးနှောက်ပိုင်း ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမှာ အဓိကကျပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ Vitamin B12 ပါဝင်မှုနည်းပေမယ့် အသား၊ငါးနဲ့ နို့ ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ ကြွယ်ဝပါတယ်။
နနွင်းမှာ curcumin ပါဝင်ပြီး ရောင်ရမ်းမှုနဲ့ ဆဲလ်တွင်းအတွင် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ ကို တားဆီးပေးပါတယ်။ အသီးအရွက်ကြော်မှာ နနွင်းအနည်းငယ်ဖြန်းပြီး စားသုံးသင့်ပါတယ်။
၆။ Vitamin A
မုန်လာဥ၀ါ၊ ကန်စွန်းဥ နဲ့ ကိုက်လန်တို့ မှာ ဗီတာမင်ပေါကြွယ်ဝပါတယ်။ ဗီတာမင် အေဟာ ရောဂါကူးစက်မှုကို တွန်းလှန်ပေးပြီး မျက်လုံးကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေပါတယ်။ ဒီ အသီးအရွက်တွေကို တစ်နေ့ ပုံမှန်စားသုံးပေးရုံနဲ့တော်ရုံ ဖျားနာခြင်းမရှိ ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/31/2015 09:00:00 AM No comments:
စာရိုက်တဲ့အခါ အမှားတွေ များ လာတာမျိုး၊ အရင်ကလောက် စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ မကောင်း တော့တာမျိုး စတာတွေ ကြုံလာ ရခြင်းဟာ ဦးနှောက်ဆဲလ်တစ်ခုခု ယိုယွင်းလာတာကို သတိပေး လိုက်တာပါပဲ။ နေ့စဉ်လုပ်မိတဲ့ အရာတွေကနေ ဦးနှောက်ကို တဖြည်းဖြည်း ပျက်စီးစေနိုင်တာ ကြောင့် ထပ်မလုပ်မိရလေအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင် ဆရာဝန်တွေ အကြံပြုသလို စိတ် ရောကိုယ်ပါ ကောင်းကောင်းနား နေဖို့ လိုပါတယ်။ နေမကောင်း ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ဦးနှောက်ဟာ အ လုပ်တွေ ပိုလုပ်ရတာကြောင့် အတွေးနယ်ချဲ့ပြီး စဉ်းစားတာမျိုး တွေ ရှောင်ပြီး အိပ်စက်အနားယူ သင့်ပါတယ်။
အလုပ်သွားဖို့ အချိန်နီးလို့ ကတိုက်ကရိုက်လုပ်ရင်း မနက် စာလွတ်သွားတာမျိုးတွေအဖြစ် များလာရင် ဦးနှောက်ဆီကို အာ ဟာရရောက်တာနည်းပြီး ဦး နှောက်စွမ်းဆောင်ရည်တွေ လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ မနက်စာ မစားဘဲ နေတာဟာ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို လျော့ကျစေတဲ့ အပြင် ဦးနှောက်ကျန်းမာစေဖို့ လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေ ယုတ် လျော့ကုန်တာမို့ မနက်စာတော့ ပုံမှန်စားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ အစားစားလွန်းတာပါ။ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး စားရင် အင်ဆူလင်ထုတ်လုပ်မှု ကို ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အ၀လွန်၊ ဆီးချိုရော ဂါတွေဖြစ်နိုင်လို့ လိုတာထက် ပို မစားဖို့ရှောင်ရပါမယ်။
ဦးနှောက်ဟာ ရေဓာတ်လုံလောက်စွာရဖို့ လိုတာကြောင့် ရေမသောက်ဘဲ အကြာကြီးနေတာ မျိုးက ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို ထိ ခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်လိုအပ်နေရင် ဦးနှောက် က နေပြန်လည်စုပ်ယူတာကြောင့် ရေများများ သောက်ပေးဖို့ လို အပ်ပါတယ်။
သွေးတွင်းသကြားဓာတ် တွေ မြင့်လွန်းရင် မှတ်ဉာဏ်နဲ့ သင်ယူနိုင်စွမ်းတွေကို ထိခိုက်နိုင် တာမို့ အချိုတွေ စားလွန်းတဲ့ အ လေ့အထကို ရှောင်ရပါမယ်။ ဦး နှောက်ကို စိတ်ဖိစီးမှုက အဆိုးရွား ဆုံး ထိခိုက်နိုင်တာမို့ စိတ်ဖိစီးမှု မဖြစ်ဘဲ တက်ကြွလန်းဆန်းနေ အောင် ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါ တယ်။
အိပ်မပျော်လို့ တစ်ညလုံး ချက်တင်ထိုင်တာ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့် တာတွေကလည်း ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်စေတာကြောင့် အိပ်ချိန် မှန်မှန် ရှိနေစေဖို့လည်း လုပ် ဆောင်ရမှာပါ။ နောက်တစ်ချက် ကတော့ ဆေးလိပ်သောက်တာ ပါ။ ဆေးလိပ်သောက်တာ ကြာ လာလေ မှတ်ဉာဏ်အတွက် ဆိုး ကျိုးပေးလာလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကို အနားမပေးဘဲ တစ် ချိန်လုံးထိုင်ပြီး တီဗီကြည့်တာမျိုး၊ ဂိမ်းကစားတာမျိုးတွေကို တတ် နိုင်သမျှ လျှော့ချဖို့ လိုအပ်ပါ တယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/31/2015 08:50:00 AM No comments:
မေတ္တာ ဆိုတဲ့ ပါဠိရဲ့ အနက်ကို ချစ်ခြင်းလို့ အနက် ပြန်ကြ ပါတယ်။ အချစ်က သုံးမျိုး ရှိပါတယ်။
၁။ ချစ်သူ အချစ်ရယ် ၂။ မိသားစု အချစ်ရယ် ၃။ ပါရမီ အချစ်ရယ် ဆိုပြီး သုံးမျိုး ရှိပါတယ်။
ချစ်သူ အချစ်ဆိုတာ မိန်းမ ယောကျာ်း အပြန်အလှန် ချစ်ကြတဲ့ အချစ်ပါ။
မိသားစု အချစ်ဆိုတာက မိဘနဲ့ သားသမီး ညီနဲ့အကို မောင်နဲ့နှမ စသည် မိသားစု အချင်းချင်း ချစ်ကြတဲ့ အချစ်မျိုးပါ။
ပါရမီ အချစ်ဆိုတာက တော့ သူတစ်ပါးရဲ့ အကျိုးကို ဖြစ်ထွန်းမူ့ကို လိုလားတဲ့ အချစ်ပါ ။ပါဠိလို ပြောရင် တော့ တဏှာ ပေမရယ်၊ ဂေဟသိတ ပေမရယ်၊ မေတ္တာ ပေမရယ်ပါ။ မေတ္တာ ပါရမီမှာတော့ နောက်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ မေတ္တာ ပါရမီကို ယူရမှာပါ။
ပါရမီ အချစ်ဟာ သူတစ်ပါး အကျိုးကို ငဲ့နေပါတယ်။ မိမိ အကျိုးကို မငဲ့ပါဘူး။ ကိုယ်က သူ့ကို ပါရမီ အချစ်နဲ့ ချစ်ဖြစ်နေရင် သူ ကြီးပွား စေချင်တယ် ၊တိုးတက် စေချင်တယ် ၊ အောင်မြင် စေချင်တယ်။ အစစ အရာရာ အဆင် ပြေစေချင်တယ်။ သူ့ဆီက ဘာတုံပြန်မူ့မှ မမျော်လင့် ပါဘူး ။ ဒါ- ပါရမီ အချစ်ရဲ့ သဘောတွေပါပဲ။
အကြောင်း တစ်ခုခုကြောင့် သိခွင့် ခင်ခွင့် ရကြတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ကလည်း သူ့ကို ပါရမီ အချစ်နဲ့ ချစ်မယ်။ သူကလည်း ကိုယ့်ကို ပါရမီ အချစ်နဲ့ ချစ်မယ် နှစ်ဦး စလုံးရဲ့ ခင်မင်မူ့ဟာ အစဉ်အမြဲ ခိုင်မြဲနေတော့ မှာပါ။ တစ်ဆင့်တက်ပြီး သူတရားထူး တရားမြတ် ရဖို့ အတွက်လည်း ကိုယ်က ကူညီမယ်။ ကိုယ်တရားထူး တရားမြတ် ရဖို့အတွက်လည်း သူကကူညီမယ် ဆိုရင် ပါရမီ အချစ်က နိဗ္ဗာန် အထိတောင် ကျေးဇူးပြု နေတော့တာပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကိုယ်က ချစ်တယ်ဆိုရင် ပါရမီ အချစ်နဲ့ ချစ်ပြီး နိဗ္ဗာန်ရဲ့ အထောက်အပံ့တွေ အခါ အားလျော်စွာ ဖန်တီး ပေးနေ နိုင်ရပါမယ်။ ဒီလိုပါပဲ၊ သတ္တ၀ါ အားလုံး အပေါ်မှာ ပါရမီ အချစ်နဲ့ ချစ်နိုင်ရမှာ ဖြစ်သလို၊ ချစ်သူ အချင်းချင်း မိသားစု အချင်းချင်း မှာလည်း ပါရမီ အချစ် ပါတဲ့ အချစ်တွေ တွဲ တွဲ ပါနေပါမှ အစဉ်အမြဲ ခိုင်မြဲနေမှာပါ။ ချစ်သူ အချင်းချင်း ချစ်နေကြတဲ့ နေရာမှာ တဏှာ ရာဂကို အခြေခံတယ် ဆိုပေမဲ့ သူကုသိုလ် ဖြစ်ဖို့ ကိုယ်က ဖန်တီးပေး နေမယ်။ ကိုယ် ကုသိုလ် ဖြစ်ဖို့အတွက် သူက ဖန်တီး ပေးနေမယ် ဆိုရင် ချစ်သူ နှစ်ယောက်အတွက် ရန်ဖြစ်တယ်၊ မုန်းတယ် ဆိုတာ တွေဟာ အိပ်မက်ထဲမှာတောင် ရှာလို့ ရတော့မှာ မဟုတ်တော့ ပါဘူး။
ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ မိသား စုဘ၀လေးဟာ ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်းလေး ရှိနေရုံတင် မကပဲ တရားထူး တရားမြတ် ရဖို့လည်း အထောက် အပံ့တွေ ဖြစ်နေ တော့မှာပါ။ အဆင်မပြေမူ့ တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ တဏှာပေမ အချစ်လောက်နဲ့ပဲ ချစ်နေကြလို.ပါ။ ပါရမီ အချစ် မပါကြ လို့ပါ။ ဒီသဘောလေးကို အာရုံပြုပြီး အစဉ်သဖြင့် ခိုင်မြဲ နေဖို့ ပါရမီ အချစ်လေးပါ တွဲ ပါပေးရပါတယ်။
တစ်ချို့ မိသားစုတွေမှာ အဆင်မပြေ ဖြစ်တယ် ဆိုတာလည်း ပါရမီ အချစ် မပါ ကြလို.ပါ။ ကိုယ့်မှာ ပါရမီ အချစ်သာ ရှိနေရင် တဖက်က မသိလို့ မှားတဲ့ အမူအရာကို ပြဦးတော့ သူ.ကို ကိုယ်က ဒေါသမထွက်ပဲ “သြော်..သူမသိလို့ ပဲလေ” ဆိုပြီး ခွင့်လွတ်ပြီးသား ဖြစ်နေ တတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပြသနာကို တရား သဘောလေးနဲ့ ဖြေရှင်း တတ်သလို အမှား ပြုသူ တစ်ဖက်သား ကိုလည်း တရားနဲ့ ပြန်လည် ဖေးမ တတ်ပါသေးတယ်။
ပြသနာ တစ်ခုခု ဖြစ်လာပြီ ဆိုရင် ကိုယ်ဖတ်ခဲ့ နာခဲ့ ကျင့်ခဲ့တဲ့ တရားတွေ ပြန်အာရုံပြုပြီး တရားသဘောနဲ့ ပြန်ဖြေရှင်းရ ပါတယ်။ တကယ်လို့ မတရားတဲ့ သဘောနဲ့ ပြန်ဖြေရှင်းခဲ့ရင် မတရားတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေပဲ ပြန်ဖြစ်တော့တာပါ။ မတရားတဲ့ တုံ့ ပြန်မူ့ တွေဟာ တစ်ဘက်သားမှာ တစ်သက်တာ စိတ်ဒဏ်ရာ ရသွားစေတာပါ။ တစ်သက်တာ ရသွားတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာကို ပြန်ကုဖို့ ခက်သွားပါပြီ။ ဘ၀ဆိုတာ အမြဲတမ်း အဆင်ပြေ မနေ နိုင်ပါဘူး။ တစ်ချိန်ချိန် ကာလ တစ်ခုခုမှာ ကြီးမားတဲ့ အဆင်မပြေ မူ.ကြီးတွေ ဖြစ်လာ နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မျိုးမှာ ကိုယ် ပါရမီ အချစ်နဲ့ ချစ်ခဲ့ရသူတွေက ကိုယ့်အနားကို ပြေးလာကြမှာပါ။
ဘ၀မှာ ကိုယ်က ပါရမီ အချစ်နဲ့ ချစ်ခဲ့ရသူ မရှိခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်ကြောင့် စိတ်ဒဏ်ရာ ရစေခဲ့တဲ့ သူတွေပဲ ရှိခဲ့တယ် ဆိုရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ အဲဒီ အဆင်မပြေမူ. တွေနဲ့ပဲ သေသွားမယ်ဆိုရင် တရားလည်း မကပ်လိုက်နိုင်ရင် မကောင်းတဲ့ ဂတိ တစ်ခုခုကို ရောက်သွား နိုင်ပါတယ်။
ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ သဘောက ကိုယ့်အမှားကို ကိုယ်ပြန်မြင်ခဲ ကြပါတယ်။ အဲဒီ အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်ကို ပါရမီ အချစ်နဲ့ ချစ်သူ ၊ဒါမှမဟုတ် မိတ်ကောင်း ဆွေကောင်း တစ်ဦးဦးက ကိုယ့်အမှားကို မြင်ပြီး ပြုပြင် ပေးတဲ့အခါ၊ ပြုပြင်ပေးတဲ့ အတိုင်း လက်ခံ ကျင့်သုံး ရပါတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ ဥပက္ခာပြု သွားအောင် ပြုပြင်ဖေးမမူ.ကို မျက်ကွယ် မပြုရပါဘူး။ အလေးအနက်ထား ကျင့်သုံး ပေးရပါတယ်။ ဒီတော့ ပါရမီ အချစ်ဆိုတာ လူတိုင်း လူတိုင်းအတွက် လိုအပ်နေ တော့တာပါ။ မေတ္တာ ဆိုတာ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူတွေကို ထိုင်ပြီး ပွားနေတာ နဲ့တင် မလုံလောက် သေးပါဘူး။ ထိုင်ပြီး ပွားတာက ပွားမေတ္တာပါ။ ကံအနေနဲ့ ပြောရရင် မနောကံ မေတ္တာပါ။ ပွားမေတ္တာ နဲ့အတူ ထားမေတ္တာ ကိုလည်း ကျင့်သုံး နိုင်ရပါမယ်။
သူတစ်ပါး အကျိုးရှိ စေမဲ့ စကားလေးတွေ ပြောပြပေးတာ၊ သူတစ်ပါး အကျိုးရှိ စေမဲ့ အလုပ် ကလေးတွေ ပြုလုပ်ပေးတာ တွေပါ။ ကံအနေနဲ့ ပြောရင်တော့ ၀စီကံ မေတ္တာနဲ့ ကာယကံ မေတ္တာပါ။ ဘယ်လို စကားမျိုးပဲ ပြောရပြောရ မေတ္တာနဲ့ ပြောပေးတာ၊ ဘယ်လို အလုပ်ပဲ လုပ်ရလုပ်ရ မေတ္တာနဲ့ လုပ်ပေးတာ၊ မြန်မာလို ပြောရင် သူတစ်ပါး အကျိုး ငဲ့ငဲ့ပြီး ပြောပေးတာ၊ သူတစ်ပါး အကျိုး ငဲ့ငဲ့ပြီး လုပ်ပေး တာတွေပါ။ ဒါတွေဟာ ထားမေတ္တာ တွေပါပဲ။
တစ်နေ. တစ်နေ. လူမျိုးစုံနဲ့ ဆက်ဆံနေ ကြရတာ ဆိုတော့ ကိုယ်က မေတ္တာ ပါပါလေးသာ ပြောဆို ပြုမူပေးရင် သူတစ်ဖက်သားမှာ အဆင်ပြေပြီး စိတ်တွေ ချမ်းသာ သွားတာပါ။ သူတင်လားဆို ကိုယ်လည်း ထပ်တူ စိတ်ချမ်းသာ ရပြန်တာပါ။ ကိုယ်ကျိုးကို ငဲ့ထားရင် စကားပြောတာ ကအစ ပေါ့ပေ့ါပါးပါး မရှိတော့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို.လဲ ဆိုတော့ စကားပြောတဲ့ အခါတိုင်း “ငါ့အတွက် ”ဆိုတာကြီးက ရင်ထဲမှာ ရှိနေတာ ဆိုတော့ ပြောရတာ မလွတ်လပ် တော့ပါဘူး။
တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ ဘာမှ မခက်ပါဘူး။ အိပ်ရာထ ကိုယ်လက် သန့်စင်ပြီးတာ နဲ့ “ငါ ဒီနေ. ဘယ်သူ နဲ့ပဲ တွေ.တွေ. မေတ္တာပါတဲ့ စကားလေးတွေပဲ ပြောပေးမယ်၊ မေတ္တာပါတဲ့ အလုပ်လေးတွေ ပဲလုပ်ပေးမယ်”လို့ စိတ်ထဲက သုံးကြိမ်လောက် အဓိဋ္ဌာန် ထားလိုက်ရင် လူတစ်ယောက်နဲ့ ဆက်ဆံလိုက် ရတာနဲ့ မေတ္တာ ဆိုတာလေးကို ပြေးသတိရ တော့တာပါ။
တစ်လလောက် လေ့ကျင့်ပြီး ကျင့်သုံး ကြည့်လိုက်ရင် နောက်ပိုင်း ဆက်ဆံမူ့ တွေဟာ မေတ္တာ ပါပြီးသား ဖြစ်နေတော့မှာပါ။ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ပုထုဇဉ် တွေဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဟာ အမြဲတမ်းတော့ ဖြူဖွေး သန့်စင် မနေနိုင် ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ အာရုံဆိုး တစ်ခုခုကြောင့် ညစ်ထေးသွား တတ်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို အခါမျိုး မှာ “ ငါ မေတ္တာ ပါရမီ ဖြည့်ကျင့်ချင်သူ ၊ငါက မေတ္တာ ပါရမီ ဖြည့်ကျင့်ချင်သူ” ၊လို့ ဆက်ကာ ဆက်ကာလေး ဆင်ခြင်ပေး လိုက်ရင် ပါရမီ ဓတ်တွေ ရင်ထဲကို ပြန်ရောက်လာတာ များပါတယ်။
ပါရမီ အချစ်ရဲ့ သဘောက သူတစ်ပါး အကျိုးကို ငဲ့ပါတယ်။ မိမိ အကျိုးကို လုံးဝ မငဲ့ပါဘူး။ ကိုယ်က အခြေခံ သဘောလေး ကို အာရုံပြုထား နိုင်ရပါမယ်။ ဒီတော့ ပါရမီ အချစ်နဲ့ ချစ်နိုင်ဖို့ အသက်ရှင်နေသူ တစ်ဦးချင်း ဆီမှာကို တာဝန်ရှိပါတယ်။ အားလုံး အားလုံးဟာ ပါရမီ အချစ်တွေနဲ.သာ ချစ်နေကြမယ်ဆိုရင် ရုပ်ဝတ္တုတွေ အလျင်အမြန် မတိုးတက်ဦးတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ အစဉ်သဖြင့် ငြိမ်းအေး နေမှာပါ။ အဲဒီ ငြိမ်းချမ်းမူ. ကို အခြေခံပြီး ၀ိပဿနာ ဘက်ကို ကူးလိုက်ရင် တကယ့် ပန်းတိုင် အစစ်ရဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ကို တန်းကနဲ ရောက်သွားတော့ မှာပါ။
သတ္တ၀ါ အားလုံး ပါရမီ အချစ်တွေနဲ့ ပဲ ချစ်နေနိုင်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ မဖြစ်နိုင်သူ တွေကြားထဲမှာ ချစ်တဲ့ စာဖတ်သူ တစ်ယောက်ကတော့ ဖြစ်နိုင်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြ ရပါမယ်။
ပါရမီ အချစ်နဲ့ မချစ်ဖူးကြ သေးလို့သာ တစ်ခြား အာရုံတွေကို စိတ်ညွတ် နေကြတာပါ။ ပါရမီ အချစ်ကို ချစ်ဖူး ပြီးသွားရင် ကုန်ခဲ့သမျှ အချိန်တွေကိုတောင် ပြန်နောင်တရ နေတော့မှာပါ။
ပုထုဇဉ်ဆိုတော့လည်း ကိလေသာလေး တွေက ရှိနေသေးတာ ဆိုတော့ အမြဲတမ်း ပါရမီ အချစ်နဲ. ချစ်နေနိုင်ဖို. ဆိုတာကတော့ မလွယ်ပါဘူး။ ပါရမီ အချစ်နဲ့ နီးလိုက် ဝေးလိုက်တော့ ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က အဲဒီ နီးနေတဲ့ သဘောလေး ဝေးနေတဲ့ သဘောလေးကို သတိနဲ့ ပြန်သိနေဖို့ ပါပဲ။
ဘာပဲပြောပြော တွေ.ကြဆုံကြ အခိုက်လေးမှာ အပြန်အလှန် ကိုယ်စီ ပါရမီ အချစ်ကလေး တွေနဲ့ ချစ်နေဖို့ ပါပဲလေ။
- ဆရာတော် အရှင်ရာဇိန္ဒ (ရဝေနွယ်- အင်းမ)၏”ပါရမီ အချစ်”ဓမ္မဆောင်းပါး ။ရုပ်ရှင် တေးကဗျာ မဂ္ဂဇင်း စက်တင်ဘာ ၂၀၀၇
နှလုံး၊စိတ်ဝမ်း-ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။ မေတ္တာဖြင့်-Aye Aye Cho
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/30/2015 09:13:00 AM No comments:
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်ပြီး ဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုတာ မတော်တဆ တိုက်ဆိုင်လို့ ရလာတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ စနစ်တကျ လေ့လာကျင့်ကြံမှုရဲ့ အသီးအပွင့်တွေပါ ။ ကျားမ အသက်အရွယ် မရွေး အခုထက် အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက် ဆရာသမားတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို နည်းနည်းချင်းစီ ဖော်ပြဖို့ ၇ည်ရွယ်ထားပါတယ်။ အဲဒါတွေထဲက ပထမဆုံးအချက်ကတော့
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှ မလေးစားရင် သူတပါးက လေးစားမယ်လို့ မထင်ပါနဲ့၊ မိမိကိုယ်ကို လေးစားမှုဟာ အောင်မြင်မှုအတွက် အခြေ ခံကျဆုံးသော့ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားတော့ ကောင်းတာတွေပဲ ရွေးလုပ်မယ်။ ဒါနဲ့ပဲ တဆင့်ထက်တဆင့် မြင့်သထက် မြင့်လာပါလိမ့်မယ်။ မခက်ဘူးဆိုပေမယ့် သိပ်လည်းမလွယ်လှတဲ့ ဒီအလုပ်ကို အခုပဲ စလိုက်ရအောင်။
(၁) လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ အထက်အောက်လူကြီးများကို အမြဲပြုံး နှုတ်ဆက်ပါ။
ပြုံးခြင်းသည် စိတ်ချမ်းသာကျေနပ်မှုကို ပြသည်။ မိမိကိုယ်ကို
လေးစားယုံကြည်ခြင်း၊ စိတ်ထက်သန် တက်ကြွခြင်းကို ပြသည်။
ရွှင်လန်းတက်ကြွသူအား လူအများ နှစ်သက်အားရစမြဲဖစ်သည်။
တကယ်အောင်မြင်နေသူများ အောင်မြင်မှု၏ အသီးအပွင့်ကို ခံစားနေရသူများသည်
အလုပ်ခွင်တွင် ဆုံမိသမျှလူတိုင်းကို ပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်ကြစမြဲဖြစ်သည်။
(၂)တယ်လီဖုန်းဖြင့် စကားပြောသည့်အခါ သင့်စကားသံထဲမှာ
ချိုသာမှုအပြုံးပါပါစေ။ ဖုန်းဆက်သည့်အခါ သင့်အမည်ကို
တတ်နိုင်သမျှအရင်ဆုံးပြောပါ။ အကယ်၍ တစ်ဖက်လူသည် သင့်အားမသိသေးသူဖြစ်က
သင်သည် ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်ကြောင်း မှန်းဆ၍ ရနိုင်မည့်အချက်အလက်တချို့နှင့်
ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့် သင်သည် ယဉ်ကျေးရည်မွန်သူဖြစ်သကဲ့သို့
လူတစ်ဖက်သားအား လေးစားအားနာတတ်သူဖြစ်ကြောင်းလည်း တစ်ဖက်လူ
သူတပါးကို လေးစားစွာ ဆက်ဆံလျှင် သင်လည်း လေးစားစွာပင် တုံ့ပြန်ဆက်ဆံခြင်း ခံရပေမည်။
(၃) သင့်အားချီးကျူးသူကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုရန် မမေ့ပါနှင့်။
ချီးကျူးခံရသဖြင့် ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်ကာ ဟာ အလကားပါဗျာ၊ ဘာမှ
မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်တေ်ာ့ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး စသဖြင့် ချီးကျူးခံရသော
မိမိလုပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ၊ မိမိကိုယ်ကိုဖြစ်စေ သေးသိမ်သွားအောင်
နှိမ့်ချပြောဆိုခြင်း မပြုသင့်။ သူတစ်ပါးချီးကျုးကာမှ မိမိလုပ်ရပ်၊
သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်ကို ဂုဏ်ဖော်ကာ အကျယ်ချဲ့ပြောဆိုနေခြင်းမျိုးလည်း
မပြုသင့်။ ချီးကျူးစကားဆိုသူအား “ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဆိုတာလောက်သာ
ပြောခြင်းသည် မပိုမလို အနေတော်ပင်ဖြစ်သည်။
(၄) သူတပါးတို့အား နာမည်ပြောင်ပေးသည့် အလေ့အထကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ မိမိကို
နာမည်ပြောင်ပေးလာလျှင်လည်း လက်မခံပါနှင့်။ သင့်ကိုယ်ပေါ်၌ ၄င်းနာမည်ပြောင်
တွယ်ကပ်မနေအောင် (ပဋိပက္ခ မများသောနည်းဖြင့်) ဖယ်ရှားပစ်ပါ။
နာမည်ပြောင်ဟူသည် လူတစ်ယောက်အား အနည်းနှင့်အများ သေးသိမ်စေသော သဘောရှိရာ
နာမည်ပြောင်ကြောင့် သင့်အပေါ် အများ၏လေးစားမှုသာမက
(၅) လုပ်ငန်းဌာနအတွင်း အုပ်စုငယ်ကလေးများ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အထူးသဖြင့် အရှုံးစိတ်သန်သူများနှင့် ရောနှောပေါင်းဖက်ခြင်းမပြုမိအောင်
သတိထားပါ။ ထက်သန်တက်ကြွကာ လုပ်ငန်းခွင်၌အောင်မြင်နေသူများကို
နေ့စဉ်နံနက်တိုင်း ငါသည် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော
ပုဂ္ဂိုဟ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ငါသည် အကန့်အသတ်မရှိသော စွမ်းအားများကို
ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည် ဟူ၍ စိတ်မှ ရွတ်ဆိုရင်း တစ်နေ့တာဘ၀ကို
တစ်နေ့တခြားတိုးပွားလာပါလိမ့်မည်။ မိမိကိုယ်ကို လေးစားခြင်းသည်
ဒါတွေကတော့ ဆရာဖေမြင့်ရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ ချမ်းသာသုခနှင့် ဓနဥစ္စာ စာအုပ်ထဲက ထုတ်နှုတ်ထားတာတွေပါ။ မဖတ်ရသေးသူတွေအတွက် အမြည်းလည်းဖြစ်၊ အကျိုးလည်းရှိစေမှာမို့ နောက်ပို့စ်တွေမှာလည်း ဆက်ပြီးဖော်ပြသွားပါဦးမယ်။
သူငယ်ချင်းအားလုံး အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘ၀ကို ရရှိကြပါစေ..
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/30/2015 09:11:00 AM No comments:
ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ အချင်းချင်း ပြန်ယူခြင်းကို အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် Cousin Marriage လို့ခေါ်ပါတယ်။ မောင်နှမ တစ်ဝမ်းကွဲကို ပြန်ယူခြင်းကို ကမ္ဘာ့ရဲ့ ၅၃ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ပိတ်ပင်ထားပေမယ့် ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ခွင့်ပြုထားတာကြောင့် ကမ္ဘာမှာ မင်္ဂလာဆောင်မှုရဲက ဆယ်ပုံပုံစ တစ်ပုံဟာ Cousin Marriage တွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
ယင်းဟာ မကောင်းပါဘူး။ ဘာသာရေး ရှုထောင့်ကနေ ကြည့်ရင် အငြင်းပွားစရာ ရှိသလို ဆေးပညာအရ ကြည့်ရင်လည်း မပေါင်းသင့်တဲ့ အကြောင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဆေးပညာပေမယ့် လူတိုင်း နားလည်အောင် ရှင်းပြရရင် Genes (မျိုးရိုးဗီဇ) အလားတူတဲ့ လူနှစ်ဦး ယူမယ်ဆိုရင် မြုပ်နေတဲ့ ရောဂါမျိုးရိုးဗီဇတွေရှိနိုင်တာကြာင့် ကလေးရတဲ့အခါ ကလေးမှာ စိတ်မနံ့ခြင်း၊ ကျပ်မပြည့်ခြင်း အပြင် အခြား ထင်မှတ် မထားတဲ့ ဗီဇချို့တဲ့တဲ့ ရောဂါ မျိုးစုံ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ ဆွေမျိုးတော်စပ်သူတွေဟာ Genes လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးရိုးဗီဇတွေခပ်ဆင်ဆင်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မြုပ်နေတဲ့ဗီဇရောဂါရှိနေတာချင်းလဲတူနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်မှာတော့ ဒီရောဂါတွေဟာ လက္ခနာမပြတတ်ပဲ အချင်းချင်းယူလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ နောက်မျိုးဆက်မှာ မြုပ်နေတဲ့ဗီဇနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးရောဂါလက္ခနာတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာပုံသေ မဟုတ်ပါဘူး။ ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေရာခိုင်နှုန်းကို ဆရာဝန်တွေနဲ့တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေရာခ်ိုင်နှုန်းဟာပုံမှန်ဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းထက်နည်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း cousin marriage ကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ တို့မှာ အများဆုံး ဆက်လက် မြင်တွေ့နေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ အခါ ဆွေမျိုး မဟုတ်လေ ကောင်းလေလေ ဖြစ်ပြီး မဖြစ်မနေ ယူပြီ ဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံး ၇ ဝမ်းကွဲလောက် အထိ ဝေးရင် genetic risk ပိုနည်းနိုင်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/30/2015 09:09:00 AM No comments:
သင်ဆင်မြန်းနေကျ အ၀တ်အစားတွေက သင်က ဘယ်လိုလူမျိုးဆိုတာ ပြောပြပေးနိုင်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ သုတေသန ရှုထောင့်မှ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက် တချို့ ရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လိုအ၀တ်အစားမျိုး၊ ဘယ်လိုဒီဇိုင်းမျိုး ၀တ်ထားသလဲဆိုတာကို ကြည့်ပြီး သူဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာ ပြောပြနိုင်တဲ့ တွေ့ရှိချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့
(၁) မတူညီကွဲပြားတဲ့ အရောင်အသွေးတွေ ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းက
သင့်အကြောင်း မတူညီကွဲပြားမှုအမျိုးမျိုးကို ပြသပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးကတော့ အနီရောင်မှာ လှပပြီး တမူထူးခြားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု တချို့ရှိကြောင်း လေ့လာမှုများက ဆိုထားပါတယ်။ အနီရောင်က လိင်ကိစ္စကို ညွန်းဆိုနေပုံလည်း ရပါတယ်။ အမျိုးသားတွေကို အမျိုးသမီးတွေ ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အရောင်ဟာ အနီရောင်ဖြစ်တယ်လို့ သုတေသနမှ ဖော်ပြထားတယ်။
(၂) ငယ်ရွယ်နုပျိုအောင် ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းက
သင့်ကို ပိုမိုကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ မျက်မှန်က သင့်ကို ပိုစမတ်ကျစေပေမယ့် ဆွဲဆောင်မှုတော့ လျော့နည်းစေတယ်။ ဒါ့အပြင် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေက သူ့အိမ်ထောင် ဘယ်လောက်အဓွန့်ရှည်/တိုကြောင်း ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။
(၃) တံဆိပ်နာမည်ကပ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားမျိုးတွေကိုတော့
သင်ကြိုက်နှစ်သက်မှာ သေချာတာပေါ့။ ဒါ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့က သင့်အဆင့်အတန်းမြင့်မားနေသလို အထင်မြင်ရောက်စေနိုင်ပြီး လူတွေဆီကလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ပြုမူဆက်ဆံခြင်းကို သင်ရရှိစေနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကယောက်ကယက်ဖြစ်ခြင်းကို ပြသနေပါတယ်။ ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေးဝတ်စားခြင်းဟာ ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ယူဆကြသလို ရှုပ်ယှက်ခတ်ပြီး သာမန် အများတကာဝတ်နေကျ အတိုင်းမဟုတ်ပဲ ၀တ်ဆင်ထားတတ်တဲ့သူကတော့ အသစ်အဆန်းတွေ မြင်တတ်ပြီး ၊မလျို့ဝှက်တတ်တာကိုပြသပါတယ်။ ကော်လာဟိုင်းပြီး ငွေကြေးအမြောက်အများပေးရတဲ့ အဝတ်အစားတွေက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အတ္တပေမ ကိုဖော်ညွန်းပါတယ်။
(၅) အဖြူရောင် ဝတ်စုံလေးတွေ ဝတ်ဆင်လာတဲ့အခါ
ဆရာဝန်တွေကို သင်ပိုယုံကြည်မှုရှိလာတတ်သလို သင်မျှော်လင့်ထားသလို အနုပညာရှင်တွေ ၀တ်စားဆင်ယင်လာတဲ့အခါမှာလည်း သူတို့ရဲ့ ဂီတကို ပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်လာတတ်ပါတယ်။ အဲ့သလိုမျိုးပဲ သင်ဝတ်စားဆင်ယင်တဲ့ အရာက သင့်ပြုမူနေထိုင်မှုကို ပုံဖော်ပေးပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူကောင်းတစ်ယောက်လို နေပြချင်ရင် အဝတ်အစားကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်တတ်ရပါမယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/30/2015 09:06:00 AM No comments:
အဝတ်လျှော်တဲ့ အလုပ်ကို အများစုက မနှစ်မြို့ကြပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ဒီအလုပ်အတွက် အရင်ကထက် ပိုပြီး အဆင်ပြေစေမယ့် နည်းလမ်းတွေနဲ့ လွယ်ကူသက်သာစေမယ့် နည်းလမ်း တချို့ရှိနေပါတယ်။ မိမိဂျင်းဘောင်းဘီ အလှမပျက်အောင်၊ အဝတ်လျှော်စက်လည်း သန့်ရှင်းအောင်၊ အနံ့ဆိုးတွေလည်း ပျောက်ကင်းအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမယ် စသည်စသည်ဖြင့် နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။
အဲဒါတွေကို မိမိတို့ရဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်တာ အံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်။
အဝတ်လျှော်ဖွတ်မှုဆိုင်ရာ သိသင့်တဲ့ အချက်များ
ဂျင်းဘောင်းဘီကို ဇလုံတစ်ခုအတွင်း ရေတစ်ခွက်နဲ့ ဆားတစ်ခွက်နဲ့အတူ စိမ်ပါ။
ဆားက ဂျင်းရဲ့အရောင်ကို မြဲမြံစေပြီး အရောင်မြိန်တာ နှေးကွေးစေပါလိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ်လျှင် အဲဒီအစား ဘောင်းဘီကို ပလတ်စတစ်ထဲ ထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ အအေးခံနိုင်ပါတယ်။
ဂျင်းဘောင်းဘီကို ရေခဲသေတ္တာထဲ အအေးခံတာဟာ အနံ့ဆိုးတွေ ဖယ်ရှားနိုင်ကြောင်း Levi’s ကုမ္ပဏီရဲ့ ပြောဆိုချက်အရ သိရပါတယ်။
ရေအေးက အဝတ်စကျုံ့တာ ကာကွယ်နိုင်တယ်။ မီးပူမတိုက်ပါနဲ့။ အခြောက်မှုတ်စက် အသုံးပြုပါ။ သင့်အဝတ်အစားတွေကို စိုစိုပြေပြေ ကျော့ကျော့မော့မော့ဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။
ညစ်ပတ်နေတဲ့ အ၀တ်လျှော်စက် သန့်စင်ဖို့အတွက် ပလုတ်ကျင်းရည်ကို အသုံးပြုပါ။ ဘာမှမရှိတဲ့ အဝတ်လျှော်စက်ထဲ ပလုတ်ကျင်းရည် ၁/၂ ခွက်ထည့်ပါ။ စက်ကို လည်ပတ်စေခြင်းအားဖြင့် ပိုးသတ်ပေးပြီး လတ်ဆတ်၊ သန့်စင်စေပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/30/2015 09:04:00 AM No comments:
ယခင်က အကြောင်းအရာ တစ်ခုခု ပြန်စဉ်းစားမရဘဲ မေ့နေသည့်အခါ အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနည်းကား တစ်ရေးအိပ်လိုက်ဖို့ ဖြစ်သည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက ပြောကြားလိုက်သည်။
အိပ်စက်ခြင်းသည် မှတ်ဉာဏ် လမ်းကြောင်းများ ပြန်ပွင့်စေပြီး ယခင်က မေ့နေသည့် ကိစ္စများကိုပါ ပြန်မှတ်မိလာအောင် ကူပေးနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ သုတေသနတွင် ပါဝင်သူများကို စကားလုံးများ မှတ်ခိုင်းသည်။ ပထမ တစ်ကြိမ်တွင် ညအိပ်ပြီး မိုးလင်းမှ ပြန်ရွတ်ခိုင်းသည်။ နောက်တစ်ကြိမ် တွင်ကား မနက်ပိုင်းမှာ မှတ်ခိုင်းပြီး (၁၂) နာရီကြာပြီးနောက် ညပိုင်းတွင် ပြန်ရွတ်ခိုင်းသည်။ ညအိပ်ပြီး မနက်မှာ ပြန်ရွတ်သူများ ပိုမှတ်မိကြောင်း တွေ့ခဲ့ရသည်။ စာမေးပွဲဖြေမည့် သူများသည် ညဘက်မှာ စာကြည့်ပြီးပါက အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ကာ မနက်မှာ စာမေးပွဲ သွားဖြေခြင်းသည် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဟု ယခုစစ်တမ်းကို ထောက်ပြီး သုတေသန ပညာရှင်များက ဆိုလိုက်သည်။
အိဇိတာ တက္ကသိုလ်မှ စိတ်ပညာရှင် ဒေါက်တာ နီကိုလေ ဒူမေနှင့်အဖွဲ့က လေ့လာ သုတေသန ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဦးနှောက် အတွင်းရှိ ပြန်မှတ်မိခြင်းကို ဖြစ်စေသော ဟစ်ပိုကမ်းပတ်စ် အပိုင်းသည် အိပ်စက်ခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်မှု ရှိနေကြောင်း ဒေါက်တာ ဒူမေက ပြောသည်။ အိပ်နေချိန်တွင် ထိုအပိုင်းသည် တစ်နေ့တာ အတွင်းနှင့် ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းများအတွင်း မှတ်သားထားသည်များကို ပြန်ဖော်ထုတ်ကာ စဉ်းစားလေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင် နိုးနေချိန်တွင် အရေးကြီးသည်ဟု မှတ်ယူထားပြီး အစဖော်မရသည့် အချက်များကိုလည်း ထိုအပိုင်းသည် အိပ်နေချိန်တွင် ပြန်ဖော်ထုတ်ကာ စဉ်းစား သုံးသပ်ပေးကြောင်း ဒေါက်တာ ဒူမေက ပြောသည်။
လေ့လာမှု စစ်တမ်းအပြည့်အစုံကို Cortex ဂျာနယ်တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားသည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/30/2015 09:01:00 AM No comments:
ဘဝတွင် အဖြေမရှာမိခဲ့သော စိတ်ဆင်းရဲမှု၊ မဖြေရှင်းခဲ့မိသော မကျေနပ်မှု၊ တီးတိုးတိုင်ပင်ဖော်မရှိသော အထီးကျန်မှု အစရှိသည်တို့သည် Suicide (မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေလိုမှု) ၏ အခြေခံသဘောများပင်ဖြစ်သည်။ စီးပွားပျက်ခြင်း၊ ရည်းစားကထားခဲ့ခြင်း၊ ပြင်းထန်လှသောရောဂါဝေဒနာကို မခံစားနိုင်တော့ခြင်း စသည်များမှ တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသော အကြောင်းတရားတို့ကြောင့်လည်း SUICIDE လုပ်တတ်ပါသည်။ နောက်တစ်မျိုးမှာ မိဘဆီမှ နွေးထွေးသော မေတ္တာအကြင်နာ မရရှိဘဲ အထီးကျန်စွာ ကြီးပြင်းလာရသော လူများတွင်လည်း ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။
"သေသွားတာပဲကောင်းပါတယ်" ဆိုတဲ့အတွေး သင့်ခေါင်းထဲတွင် မကြာခဏ ပေါ်လာပြီး ဆက်လက်ရှင်သန်လိုစိတ် ပါးပါးလေး ရှိသေးတယ်ဆိုရင် ---
သင့်စိတ်ကို ပကတိအတိုင်း ချပြလို့ရလောက်အောင် ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေမျိုး ရှိသလား အရင်စဉ်းစားလိုက်ပါ။ ရှိလျှင်ထိုမိတ်ဆွေနှင့် အမြန်တွေ့ဆုံပြီး ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာတွေကို ရင်ဖွင့်လိုက်ပါ။ အပေါ်ယံပေါင်းသူများကိုတော့ မချိန်းမိပါစေနှင့်။ သူ့ဘက်မှ ဆောရီဟာ။ မအားလို့ပါကွာ။ ဆိုလျင် သေချင်စိတ်မှာ အမြင့်ဆုံးဒီဂရီသို့ တက်သွားပေလိမ့်မည်။ တစ်ယောက်ထဲ အရက်သောက်ခြင်းကလည်း အဆိုးဆုံးအခြေအနေသို့ ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။ အတတ်နိုင်ဆုံး မိမိပြဿနာတွေကို အကောင်းဘက်ကပဲ မရမကလှည့်တွေးပေးပါ။ သီးချင်းတွေအော်ဆိုလိုက်ခြင်း၊ ဟာသကားများကြည့်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် လျှောက်လည်ခြင်း စသည့်အခြားအခြားသော စိတ်ဖြေနည်းများမှာ ပြဿနာကို ယာယီဟန့်တားပေးနိုင်စွမ်းပဲ ရှိပါတယ်။
အကောင်းဘက်ရှုထောင့်ဘက်မှ ပြောင်းတွေးခြင်းမှသာ မိမိစိတ်ကို မိမိပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ မိမိစိတ်ကို ပြန်ထိန်းနိုင်ပြီဆိုလျင် နောက်တဆင့် ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲဆိုတဲ့ အဖြေကို ရှာနိုင်လာပါလိမ့်မည်။ နောင်တစ်ချိန်တွင် ထိုအရာများသည် အမှတ်တရ အတွေ့အကြုံအနေဖြင့် ကျန်နေပါလိမ့်မည်။ လက်လွန်ပြီး သေအံ့စဲစဲအချိန်မှ ပြန်ရှင်ချင်တယ်ဆိုလည်း နောက်ပြန်လှည့်လို့ မရပါသဖြင့် ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။
Stacy Chan (ရိုးရာလေး)
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/30/2015 09:00:00 AM No comments:
ယူအေအီးနိုင်ငံသည် ကောင်းကင်ယံ တိမ်တိုက်များထဲမှ ရေတစ်စက် တစ်ပေါက်ပါမကျန် မိုးရွာချ လာစေရန်အတွက် ဆားဒုံးကျည်များ အသုံးပြုကာ မိုးရွာအောင် ဖန်တီးနေကြောင်း သိရသည်။
ထိုနည်းလမ်းကို တိမ်မိုး ချူနည်းဟု ခေါ်တွင်သည်။ တိမ်တိုက်ထဲတွင် ရေထု သိပ်သည်းဆ များလာအောင် လုပ်ခြင်းဖြင့် မိုးအဖြစ် ရွာချလာအောင် ဖန်တီးခြင်းဖြစ် သည်။ ရေနံကြွယ်ဝသော ယူအေအီး နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ အခြောက်သွေ့ဆုံး(၁၀) နိုင်ငံ စာရင်းထဲတွင်လည်း ပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင် မိုးရေချိန် သုံးလက်မခန့်သာ ရှိသည်။ ဗြိတိန် ပျမ်းမျှနှုန်းအောက်(၁၅)ဆ နည်းသည်။ မိုးချူနည်းဖြင့် မိုးရေချိန်တိုးလာဖို့ ယူအေအီးက မျှော်လင့်ထားသည်။
“မိုးတိမ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းလို့ ရနိုင်မယ့် တိမ်တိုက်မျိုး ထောက်လှမ်းမိတာနဲ့ ဆားဒုံးကျည် တပ်ထားတဲ့ လေယာဉ်တွေ စေလွှတ်ပြီး ဆားရည်တွေ ဖျန်းချတဲ့ နည်းနဲ့ တိမ်တိုက်ထဲက ရေခိုးရေငွေ့တွေကို ပိုသိပ်သည်းတဲ့ ရေထုအဖြစ် မြန်မြန်ပြောင်းအောင် လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့ မိုးမြန်မြန် ရွာချအောင် ဖန်တီးပါတယ်”ဟု ယူအေအီး မိုးလေ၀သနှင့် ငလျင်ဌာနမှ ဒုညွှန်ကြားရေးမှူး မာ့ခ်နယူးမန်းက ပြောသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ်မှ နှင်းလျှောစီး စခန်းသည်လည်း နှင်းများများကျအောင် ထိုနည်းကို အသုံးပြုကြောင်း သိရသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ပေကျင်း အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲကာလကလည်း ထိုနည်းလမ်းသုံးကာ အားကစားကွင်းဆီသို့ မိုးတိမ်တိုက်များ မရောက်ခင် ကြိုတင် မိုးချူကာ ရွာချစေခြင်းဖြင့် အားကစားကွင်း တစ်ဝိုက် မိုးလေ ကင်းစင်အောင် ဖန်တီးခဲ့ဖူးသည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/30/2015 08:55:00 AM No comments:
ကိုကာကိုလာတစ်ဗူးက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို တစ်နာရီအတွင်း အကျိုးများစွာ သက်ရောက်နိုင်ပုံ
သင်အကြိုက်ဆုံး အမြှပ်တထထနဲ့ ကိုကာကိုလာ တစ်ဗူးကို သောက်ပြီးချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဘာတွေဖြစ်ပျက်သွားလဲဆိုတာ စူးစမ်းကြည့်ဖူးပါလား။ နာမည်ကြီး UK ဆေးစပ်ပညာရှင် Niraj Naik က သူ့ ရဲ့ တွေ့ ရှိချက်တွေကို အခုလို ရေးသားအသိပေးခဲ့ပါတယ်။
ပထမ ၁၀ မိနစ်အတွင်း
သကြားစားပွဲတင်ဇွန်း ၁၀ ဇွန်းစာ ပမာဏက သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအဖွဲ့ အစည်းက စတင် ရောက်ရှိပါတယ်။ အချိုဓာတ်လွန်ကဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်မယ့် အန်ချင်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်အောင် ဖော့စဖောရစ်အက်ဆစ်က အရသာကို ဖြတ်တောက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ပါဝင်မှုက ဆောင့်တက်လာပြီး ပန်ကရိယကနေ သကြားထဲ သွေးအတွင်းဝင်မှုကို ထိန်းပေးတဲ့ အင်ဆူလင်ကို ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အသည်းက သကြားဓာတ်တွေကို အဆီအဖြစ် ပြောင်းလဲသိုလှောင်လိုက်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်က ကာဖိန်းဓာတ်စုပ်ယူမှု အပြည့်အ၀ပြီးဆုံးပါပြီ။ သင့်ရဲ့အသည်းက သွေးလမ်းကြောင်းထဲ သကြားပမာဏပိုထည့်ပေးလိုက်တာကြောင့် သင့်ရဲ့မျက်ဆံက ကျယ်လာပြီး သွေးဖိအားမြင့်တက်လာပါတယ်။ ဦးနှောက်တွင်းက အဒီနိုဆင်းရီဆက်တာကို ပိတ်လိုက်တာကြောင့် အိပ်ချင်ငိုက်မျဉ်းမှုတွေ မဖြစ်ပေါ် နိုင်တော့ပါဘူး။
၄၅ မိနစ်အကြာမှာတော့ ဒိုပါမင်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တက်လာပြီး ဦးနှောက်တွင်းက ပျော်ရွှင်မှုထိန်းချုပ်တဲ့အကန့် ဟာ ကို ပိုနှိုးဆွသလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါဟာ ဦးနှောက်ကို ဘိန်းဖြူ က လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ တူတူပါပဲ။
တစ်နာရီအကြာမှာ ကာဖိန်းရဲ့ ဆီးရွှင်စေတဲ့ဂုဏ်သတ္တိက အစွမ်းပြလာပါတယ်။ သွေးတွင်းသကြားပါဝင်မှုကျဆင်းလာပါတယ်။ သင်ဟာ အခုအချိန်မှာ ကိုကာကိုလာ ထဲမှာပါတဲ့ ရေတွေကို ဆီးလမ်းကြောင်း က ပြန်စွန့် ထုတ်နေပါပြီ။ တက်ကြွလန်းဆန်းမှုမရှိတော့ပဲ သကြားဓာတ် ကျဆင်းမှုကို သင်ခံစားရတော့မှာပါ။ ဒီအချိန်မှာ သင်ဟာ လှုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်လျော့နည်းလာပြီး စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။“ တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာအနေနဲ့ တစ်နေ့ ကို ကိုလာကိုလာဗူးပေါင်း ၁.၆ ဘီလီယံကျော် ရောင်းချနေရပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ခါ ကိုကာကိုလာတစ်ဘူးဝယ်ခါနီးတိုင်း ဒီဆောင်းပါးကို သတိရပေးပါ” လို့ Dr.Nail က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/30/2015 08:51:00 AM No comments:
မျက်နှာပေါင်းတင်ကပ်ခွာတွေအကြောင်း သင်မသိသေးတဲ့ အရာများ
ခုနောက်ပိုင်း မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေကအစ သူတို့ကိုယ်ပိုင် အချိန်လေးတွေမှာ မျက်နှာအသားရေပိုင်းကို ဂရုစိုက်ကြတဲ့အနေနဲ့ အိမ်မှာ အလွယ်တကူ ကပ်ထားလို့ရတဲ့ မျက်နှာကပ်ခွာ (mask) တွေ သုံးလာကြပါပြီ။ တစ်ခါတစ်လေ အဲ့ဒီကပ်ခွာတွေ ကပ်ပြီး selfie ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေတောင် သင်တွေ့ဖူးတယ်မလား။ အဲ့ဒီ ကပ်ခွာတွေက သုံးပြီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့တည့်တယ်၊ အဆင်ပြေတယ်ဆို၇င် အသားအရေ ၀င်းပြီး ကျန်ခဲ့မယ်၊ ကြည်လင်တာမျိုးလေးတွေ အကျိုးကျေးဇူးရှိတာမို့ မျက်နှာပေါင်းတင် ကပ်ခွာလေးတွေအကြောင်း ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
၁။ပေါင်းတင်ကပ်ခွာဆိုပေမယ့် ကပ်ခွာမပါပဲ ရိုးရိုးပေါင်းတင်တာမျိုးနဲ့တော့ အကျိုးကျေးဇူး မတူညီနိုင်ပါဘူး။
အရင်တုန်းက ဆိုင်သွားပြီး ပေါင်းတင်တယ်ဆိုရင် မျက်နှာပါ ပေါင်းတင်ဆေးရည်၊ ဆေးအနှစ်တွေနဲ့ လိမ်းကျံပြီး ပေါင်းတင်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီပေါင်းတင်ကပ်ခွာကတော့ ခုနပြောသလို ပေါင်းတင်တာမျိုးနဲ့ မတူပါဘူး။ ဒီမျက်နှာ ကပ်ခွာဟာserum အခြေခံပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ချည်သားလိုအသားမျိုး မို့လို့ သင့်မျက်နှာအသားရေကို ဟိုးအတွင်းထဲထိ သန့်ရှင်းအောင်တော့ မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီပေါင်းတင်ကပ်ခွာတွေဟာ မျက်နှာအသားရေအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ အက်ဆစ်ဓာတ်၊ သတ္တုဓာတ်နဲ့ အခြားသော ဗိုက်တာမင်တွေကိုတော့ ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရွှံ့စေးမျက်နှာပေါင်းတင်ဆေးတွေလိုလည်း အသားကို ခြောက်မသွားစေပါဘူး။
၂။Serum သုံးမယ့်အစား ဒါကို နေ့စဉ်သုံးလို့ မရပါဘူး။
မျက်နှာပေါင်းတင်ကပ်ခွာတွေဟာ serum ကို အခြေခံထည့်သွင်းထားတယ်ဆိုပေမယ့် ဒါကို serum အစားသုံးလို့တော့ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ သူဟာ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တဲ့အခါ အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူကပ်ထားလို့ရမယ်။ ခရီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်အသားလေး ၀င်းနေအောင် အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူသုံးလို့ရတဲ့အပြင် တစ်ပတ်ကို လေး ၊ ငါးကြိမ်အထိကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သူ့ဆီမှာ ပြင်းလွန်းတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ ထည့်သွင်းထားခြင်း မရှိတာမို့ မျက်နှာအသားရေစားသွားမှာ၊ နီရဲလောင်သွားမှာမျိုးတွေ စိုးရိမ်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။
၃။မျက်နှာပေါင်းတင်ကပ်ခွာတွေဟာ ရေဓာတ်ကို အဓိက ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။
အသားရေမှာ လိုအပ်တဲ့ ရေဓာတ်ကို အဓိကဖြည့်တင်းပေးတဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်ကပ်ခွာတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဈေးကွက်ထဲမှာ တွေ့ရမှာပါ။ စစ်တမ်းကောက်ထားတဲ့ မှတ်တမ်းတွေအရတော့ အားလုံးဟာ ရေဓာတ်ကို ပိုမိုဖြည့်တင်းပေးနိုင်ဖို့ အဓိကထား ဖန်တီးထားကြတယ်လို့ သိရပြီး ၀က်ခြံပျောက်တာ၊ အရေပြားတွန့်တာမျိုး ပျောက်ကင်းသွားစေတာမျိုးထက် ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းခြင်းကိုသာ အဓိကထားတာပါတဲ့။ ဒါ့အပြင်သူက မျက်နှာအသားရေအပူချိန်ကိုလည်း အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားစေတတ်ပြီး အပူချိန်ပိုတိုးသွားစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၄။ဒီကပ်ခွာတွေကို ၀က်ခြံအထွက်များတဲ့သူတွေ မသုံးသင့်ပါဘူး။
သင်က မျက်နှာမှာ ၀က်ခြံတွေ အများကြီးထွက်နေလို့ ကပ်ခွာဝယ်ကပ်ပြီး ၀က်ခြံတွေ လျော့ပါးသွားအောင် လုပ်မယ်လို့ တွေးလိုက်ရင် ဒါဟာ မှားယွင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်လို့ ဆိုပါရစေ။ ကပ်ခွာဟာ မျက်နှာအသားရေရဲ့အပူချိန်ကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်တာကြောင့် သင့်မျက်နှာပေါ်က ဘက်တီးရီးယားတွေကို ပိုမိုပြန့်နှံ့သွားစေကာ ၀က်ခြံပိုထွက်စေတတ်လို့ပါ။ ဒါ့ကြောင့် အဆီပြန်တဲ့ အသားရေရှိတဲ့သူ၊ ၀က်ခြံထွက်တဲ့သူတွေဟာ သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တောင် အရင်ဆုံး မျက်နှာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို တည့်မတည့် ကပ်ပြီး စမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
၅။ကပ်ခွာကို နှာဖူးက စကပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ပေါင်းတင်ကပ်ခွာတွေဟာ ဆိုဒ်တစ်ဆိုဒ်ထဲ ပုံမှန်ထုတ်တတ်တာကြောင့် သင့်မျက်နှာနဲ့ အဆင်ပြေချင်မှ ပြေပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဆင်ပြေပြေကပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် နှာဖူးကစပြီး ကပ်ပေးပါ။ ဒီလိုမှသာ မျက်လုံးနဲ့နှာခေါင်းကို အတိအကျ အဆင်ပြေပြေ ကပ်နိုင်မှာပါ။ အောက်က စကပ်မယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေဖို့ မလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/30/2015 08:49:00 AM No comments:
ဝါဆိုလပြည့်ဆိုတာ မြန်မာတွေအတွက် အရေးပါလှတဲ့ နေ့ လေးတစ်နေ့ ပါ။ ကျေးဇူးတော်ရှင် ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား တရားဦးဟောကြားခဲ့သော ဓမ္မစင်္ကြာတရားကြောင့် ဗုဒ္ဓအလင်းရောင်တွေ ထိန်လင်းခဲ့ပါသည်။ ဓမ္မစင်္ကြာ အခါတော်နေ့ဟာ သစ္စာလေးပါးနဲ့အမှန်တရားကို ဟောပြ ခဲ့တဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ် ဖြစ်ပါသည်
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက… မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာ ရဟန်းသင်္ဃာအများစုသည် မိုးတွင်းကာလမှာ စိုက်ပျိုးထားသည့် စပါးခင်းများထဲကို ဖြတ်သန်းလေ့ရှိတာကြောင့် စပါးခင်းတွေ ပျက်ဆီးခဲ့ရပါသည်။ အဲဒီအကြောင်းကို ရွာသူရွာသားများက မြတ်စွာဘုရားကို တိုင်ကြားကြပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် စပါးပင်တဲ့စိုက်တဲ့အချိန်ကနေ စ၍ စပါးပင်တွေ မှည့်တဲ့ အချိန်ထိတိုင်အောင်.. ရဟန်းသင်္ဃာများကို မိမိသီတင်းသုံးနေသောကျောင်းမှ ဘယ်နေရာကိုမှ ညအိပ်ညနေသွားခွင့်မရှိပဲနဲ့ မိမိကျောင်းမှာပဲ သီတင်းသုံးကာ တရားအားထုတ်ဖို့အချိန်သုံးလသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကာလကို ၀ါတွင်းသုံးလလို့ခေါ်ပါသည်။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဒီဝါတွင်း သုံးလအတွင်းမှာ ရဟန်းသင်္ဃာများဟာ ဘယ်မှဝေးဝေးလံလံ မသွားပဲနဲ့ကိုယ့်ကျောင်းမှာပဲ တရားဒေသနာများကို သင်ချအားထုတ် လေ့လာ ဆည်းပူးနိုင်ပါသည် လို့ စည်ကမ်းသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
၀ါဆိုသင်္ကန်း- ဆိုတာ ၀ါတွင်းကာလ(မိုးကာလ)၌ မိမိတို့ကျောင်းအသီးသီးတွင် သီတင်းသုံးနေထိုင်သည့် သံဃာတော်များအား လှူဒါန်းသည့်သင်္ကန်းလို့ ပြောနိုင်မယ်ထင်ပါသည်။ ဘုရားရှင် ဟောကြားတဲ့ ပါဠိတော်များမှာ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကို ၀ဿာဝါသိက သာဋိက-လို့ ဟောထားပါသည်။ ပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်မှာတော့acloak for use in the rainy season- လို့ဖွင့်ပါသည်။ တိပိဋက ပါဠိအဘိဓာန်က ၀ဿာဝါသိက- မိုးကာလ၌ နေလေ့ရှိသော ရဟန်း သာဋိက-အ၀တ်(သင်္ကန်း) – မိုးကာလ၌ မိမိတို့ကျောင်းတွင် နေလေ့ ရှိသောရဟန်းတို့အား ပေးလှူအပ်သော သင်္ကန်းလို့ ဖွင့်ပါသည်။
၀ါမဆိုမီကာလမှာ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကို ကပ်လှူလေ့ရှိသည်။ ၀ါတွင်းကာလမှာ အရင်ကထက်ပိုလို့ စာသင်စာချ(ပရိယတ်) တရားထိုင်တရားပြ(ပဋိပတ်) လုပ်တဲ့သံဃာတော်တွေကို ၀ါဆိုသင်္ကန်းဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက လှူဒါန်းကြပါသည်။
Credit : Myawady News
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/24/2015 09:21:00 AM No comments:
Facebook တည်ထောင်သူဇူကာဘတ်ဂ် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ၁၀ ဦးစာရင်းဝင်လာ
Facebook ကိုတည်ထောင်သူ မာ့ခ်ဇူကာဘတ်ဂ်ဟာ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်စာရင်းရဲ့ နံပတ် ၉ နေရာကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း Bloomberg သတင်းဌာနရဲ့ စာရင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။ Ikea ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်သူ ကမ့်ပရက်ရဲ့ ချမ်းသာမှုကို ကျော်လွန်ပြီး ဇူကာဘတ်ဂ်က အဆင့် ၉ နေရာ ရောက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတာ ဇူကာဘတ်ဂ်ဟာ လက်ရှိမှာ ကန်ဒေါ်လာ ၄၃.၁ ဘီလီယံ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ Facebook ရဲ့ရှယ်ယာတန်ဖိုးတွေကလည်း စံချိန်မြင့်တက်နေပြီး ထပ်ပြီးတက်လာဖို့တောင်ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ Facebook ဟာလက်ရှိမှာ ကန်ဒေါ်လာ ၂၇၅ ဘီလီယံလောက် တန်ကြေးရှိတဲ့ လူမှုကွန်ယက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဇူကာဘတ်ဟာ အချမ်းသာဆုံး နံပတ် ၈ နေရာမှာ ရှိတဲ့ Oracle တည်ထောင်သူ အယ်လီဆင်နဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု သန်း ၃၀၀ သာကွာဟပါတယ်။ နံပတ် ၇ နေရာမှာတော့ Amazon တည်ထောင်သူ ဂျက်ဖ်က ၄၃.၅ ဘီလီယံနဲ့ ရပ်တည်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်တည်ထောင်သူ ဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ ကြွယ်ဝမှုကိုတော့ သူတို့လိုက်မီဖို့ လိုနေပါသေးတယ်။ ဘီလ်ဂိတ်ဟာ အချမ်းသာဆုံး နံပတ် ၁ နေရာမှာရှိပြီး ကန်ဒေါ်လာ ၈၅.၂ ဘီလီယံချမ်းသာကြွယ်ဝပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/24/2015 09:19:00 AM No comments:
အသက် ၄၀ ကျော် အရွယ်များအတွက် ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းသိမ်းနည်း (၅)နည်း
(၁) အပြင်စာများ မစားပါနှင့်
အပြင်စာတွေကို စားသုံးတာက ကယ်လိုရီအပိုတွေကို ရရှိစေပါတယ်။ လတ်တလော လေ့လာမှုအရ အသက် ၄၀ နှစ်ကျော် အရွယ်တွေ ကိုယ် အလေးချိန် လျှော့ချပေးဖို့ အဓိက ထိန်းချုပ်သင့်တာက ကယ်လိုရီအပိုတွေ စားသုံးမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချပေးဖို့ ကယ်လိုရီ ၁၆၀၀ သာ စားသုံးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီရရှိမှု လျှော့ချဖို့အတွက် သရေစာ စားသုံးတာနဲ့ အပြင်စာစားသုံးမှုတွေကို လျှော့ချပေးပါ။
အချိုရည်သောက်သုံးမှုကို လျှော့ချလိုက်တာက ကယ်လိုရီရနိုင်တဲ့ တခြားအစာတွေ လျှော့ချလိုက်တာထက် ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရာမှာ ပိုမိုထိရောက်မှု ရှိတယ်လို့ ဂျွန်ဟော့ကင်း တက္ကသိုလ် လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အရည်ကရတဲ့ ကယ်လိုရီက စိတ်ကျေနပ်မှုကို နည်းစေပြီး ဆာလောင်မှုကို ပိုမိုစေတာကြောင့်ပါ။
(၃) အသားဓာတ်ပါဝင်အောင် စားပါ
ဥရောပလေ့လာမှု တစ်ခုအရ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချနေသူတွေကို တစ်နေ့တာစားသုံးတဲ့ ကယ်လိုရီရဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ပရိုတင်း (အသားဓာတ်) ကနေရယူတာက ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရေးမှာ များစွာ အကျိုးရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပရိုတင်းက ဗိုက်ပြည့်စေပြီး အစာချေဖျက်ဖို့အတွက် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နဲ့ အဆီတွေထက် စွမ်းအင်ပိုမို အသုံးပြုရတာကြောင့်လို့ ပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ ကြက်သား သုံးအောင်စ ကနေ ပရိုတင်း ၂၆ ဂရမ်၊ တူနာငါး သုံးအောင်စကနေ ပရိုတင်း ၂၂ ဂရမ်ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
(၄) ညစာ မစားမီ စွပ်ပြုတ်သောက်ပါ
ညစာမစားမီ စွပ်ပြုတ်သောက်တာကြောင့် ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကို ၂၀ ရာခိုင် နှုန်း လျှော့ချနိုင်တယ်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။ ကယ်လိုရီပိုရတဲ့ ခရင်မ်နဲ့ အချိုများတဲ့ အစားအစာတွေကိုတော့ ရှောင်သင့်ပါတယ်။
(၅) အသီးအရွက်ဖျော်ရည် သောက်ပါ
အသီးအရွက်ဖျော်ရည်က အစာစားချင်စိတ်ကို လျော့နည်းစေပြီး ကယ်လိုရီ စားသုံးမှုကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီ မစ္စတာ ဒေးဗစ်က အမျိုးသမီးရော၊ အမျိုးသားတွေပါ ကယ်လိုရီ နည်းပြီး နှလုံးကျန်းမာစေဖို့ ဆိုဒီယမ် ပါဝင်မှုနည်းတဲ့ အသီးအရွက်ဖျော်ရည် သောက်သုံးပြီး အချိုရည်သောက်သုံးမှုကို ရှောင်ရှားပါလို့ ပြောပါတယ်။
Royal Hero Media
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/24/2015 09:17:00 AM No comments:
ကရင် တိုင်းရင်းသား ကလာဟယ်ကို ရှက်ဖီး ယူနိုက်တက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာချုပ် ချုပ်လိုက်ပြီ
ကရင် တိုင်းရင်းသား ကလာဟယ်ကို ရှက်ဖီး ယူနိုက်တက်က ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီလို့ ဂါးဒီးယန်း သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ တတိယ အကြိမ်မြောက် စမ်းသပ် လေ့ကျင့်မှု အစီအစဉ်မှာ ရှက်ဖီး အသင်း နည်းပြတွေက ကလာဟယ်ရဲ့ ခြေစွမ်းကို သဘောကျတဲ့အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့တာပါ။
ကလာဟယ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်က Umpiem Mai ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားစခန်းမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး သူတို့ မိသားစုဟာ သြစတြေးလျကို သွားရောက်ချင်ပေမယ့် နိုင်ငံကူး လက်မှတ် မရှိတဲ့အတွက် အခက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာတော့ ကုလသမဂ္ဂ၊ ဥရောပ သမဂ္ဂနဲ့ ဗြိတိန် အစိုးရတို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တဲ့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ဗြိတိန်တွင် ခိုလှုံ အခြေချ နေထိုင်ရေး အစီအစဉ် gateway protection programme ကြောင့် ကလာဟယ်တို့ မိသားစု ရှက်ဖီးမှာ နေထိုင်ခွင့် ရခဲ့တယ်လို့ ဂါးဒီးယန်းက ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကလာဟယ်ဟာ ဘာသာ စကား အခက်အခဲကို ဘောလုံး အားကစားနဲ့ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းအသင်းနဲ့ တနင်္ဂနွေလိဂ် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဘောလုံးကန်ကောင်းတဲ့ ကလယ်ဟယ်ကို သူငယ်ချင်းတွေက Football Unites Racism Divides group မှာ ခြေစွမ်း စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
Football Unites Racism Divides group ဆိုတာ လူသားခြင်း ခွဲခြား ဆက်ဆံမှုတွေကို ဘောလုံး အားကစားနဲ့ တိုက်ဖျက်ပြီး လူငယ်တွေ အခွင့်အရေး ပိုရလာစေဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ စီမံကိန်း တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ရှက်ဖီး ပရိသတ်တွေ အစပျိုးခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်ပါ။ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် ကစားသမား ကယ်လီဝေါ်လ်ကာဟာလည်း ဒီအစီအစဉ်ကနေ ထွန်းပေါက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလာဟယ်ဟာ ခြေစွမ်းစမ်းသပ်မှု နှစ်ကြိမ် မအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် တတိယ အကြိမ်မှာတော့ နည်းပြတွေက ကလယ်ဟယ်ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရှက်ဖီးနဲ့ အတူ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တဲ့ ကလာဟယ်က ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကစားခွင့်ရရေး မျော်မှန်းထားပြီး တနေ့နေ့ကျရင် မြန်မာ(သို့မဟုတ်) ထိုင်း လက်ရွေးစင် အသင်းမှာ အသင်းခေါင်းဆောင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခွင့်ရဖို့ မျှော်လင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"လက်ရှိ ရည်မှန်းချက်ကတော့ ယူ ၂၁ အသင်းနည်းပြ ခရစ္စ မော်ဂန်နဲ့ အသင်းကြီး နည်းပြ နီဂယ် အက်ဒ်ကင်တို့ သဘောကျဖို့ပါ။ ရှက်ဖီး အသင်းက ကျွန်တော့်အပေါ် ယုံကြည်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ပြန်ပေးဆပ်ချင်တယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲ ကစားခွင့်ရချင်တယ်။ ကျွန်တော့် ကစားသမားဘ၀ အတွက် ရည်မှန်းချက် ကြီးကြီးထားပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲတွေလို အဆင့်အတန်း အမြင့်ဆုံး ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ကစားပြီး တစ်နေ့နေ့ကျရင် မြန်မာ သို့မဟုတ် ထိုင်း လက်ရွေးစင် အသင်းကြီးရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် အဖြစ် ကစားခွင့်ရချင်ပါတယ်" လို့ ကလာဟယ်က ရိုက်တာ သတင်း ဌာနကို ပြောပါတယ်။
Ref : Guardian
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/24/2015 09:15:00 AM No comments:
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာကြပြီဆိုရင် ချမ်းသာ၊ဆင်းရဲ မရွေး ဘဝက ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ခံစားကြရပါတယ်။ လူတွေနေ့စဉ်ဖြတ်သန်းကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ အကောင်း၊အဆိုးတွေဟာ လူတွေရဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့က ဒီလိုနေ့စဉ်သင်ခန်းစာတွေက သင်ယူလေ့လာပြီး မိမိဘဝအတွက် ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်အဖြစ် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားကြသူတွေရှိသလို တစ်ချို့က နောက်ပြန်လှည့် အရှုံးပေးသွားကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။
ဘဝမှာ အတွေ့အကြုံဆိုတာ အကောင်းဆုံးသင်ပြပေးနေတဲ့ဆရာတစ်ဆူလိုပါဘဲလို့ လူကြီးသူမတွေရဲ့ပြောစကားကို ငယ်ရွယ်ချိန်တုန်းက နားမလည်ခဲ့ပေမယ့် အရွယ်ရောက်လို့ လက်တွေ့ဘဝတွေမှာ ကျင်လည်ဖြတ်သန်းလာရတဲ့အခါ ကောင်းကောင်းနားလည်လာခဲ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ လူတွေမှာ မိမိကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေထဲက လေ့လာမှတ်သားစရာတွေကို မှတ်သား၊ ရှောင်စရာတွေကို ဆင်ခြင်ရှောင်ကြည်ခြင်းဖြင့် ဘဝကို အမှားတွေနည်းအောင် အေးချမ်းမှုကိုပိုမိုခံစားရရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားပိုင်ခွင့်ရှိကြပါတယ်။
လူတွေမှာ တစ်ဦး နဲ့ တစ်ဦး ဘဝပေးကံကြမ္မာ မတူညီကြပေမယ့် မိမိကိုယ်ကိုအေးချမ်းအောင် ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ သဘာဝတရားက တန်းတူအခွင့်အရေးပေးထားပါတယ်။ ဒါတွေကို လူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာ ရှာဖွေသင်ယူရရှိနိုင်တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ထပ်ခါ ထပ်ခါ အမှားလုပ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ
လူတွေမှာ အမှားကိုထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်မိတတ်ကြတဲ့အခါ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းသွားသလို ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းအလယ်မှာ လူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုလည်း ဆုံးရှုံးကြရပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ အမှားနဲ့မကင်းကြတာအမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့်အဲဒီအမှားကို အမှားမှန်းသိပြီး ပြင်ဆင်နိုင်လိုက်ရင် မိမိအတွက် များစွာ ကောင်းကျိုးကို ရရှိစေပါတယ်။ အမြဲတမ်း မိမိကိုယ်ကိုလေ့လာဆန်းစစ်ပြီး ဘာကြောင့် ခက်ခဲနေရတယ်၊ ဘာကြောင့် လွယ်ကူချောမွေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ရှာဖွေပြီး ပြုပြင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့် မိမိဘဝအတွက် လွယ်ကူချောမွေ့တဲ့နေ့ရက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ဘဝဖြတ်သန်းမှုပုံစံကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သူတို့ဟာလည်း လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ရှုံးနိမ့်မှုများစွာကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ လူဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဘဝ မှာ ရှုံးနိမ့်မှု ၊အောင်မြင်မှုဆိုတာကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလောကမှာ လူတွေဟာ မတူညီတဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုတွေနဲ့ ရှုံးနိမ့်ဖူးကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မရှုံးနိမ့်ဖူးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတာ ကိုနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရှုံးနိမ့်မှုဆိုတာ အောင်မြင်မှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တာကြောင့် ရှုံးနိမ့်မှုထဲက လူတွေကို အောင်မြင်စေဖို့ သော့ချက်ပေးတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ရှုံးနိမ့်မှုဆိုတာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် ခြေလှမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့် ဘဝမှာ ရှုံးနိမ့်ဖို့ကို မကြောက်ဘဲ အမှားထဲက သင်ခန်းစာယူပြီး ကြိုးစားခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှုရဲ့ အနှစ်သာရကို ချိုမြိန်စွာ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
လူတွေရဲ့ဘဝ ဟာ အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲဖြစ်ပျက်နေကြတာကြောင့် ဘဝရဲ့နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုတွေကို သတိရှိရှိတွေးဆတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အပြောင်းအလဲတရားအပေါ်မှာ လက်ခံပြီး ဆောင်ရွက်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အပြောင်းအလဲတွေထဲက မိမိအတွက် ဘယ်လို ကောင်းကျိုးတွေရရှိနိုင်မလဲ ရှာဖွေတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ မိမိအတွက် သက်ရောက်မှုရှိသလား ၊မရှိဘူးလားဆန်းစစ်လေ့လာပြီး ရှောင်ရှားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ မိမိကြုံခဲ့တဲ့ အပြောင်းအလဲအပေါ်မူတည်ပြီး ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုသလဲ၊ ဘာတွေဆင်ခြင်ဖို့လိုသလဲ၊ ဘယ်လို ရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုသလဲဆိုတာ ဘဝရဲ့နေ့စဉ်မတူညီတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေက ပေးနေတဲ့ သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေလိုပါဘဲ။ သင်ခန်းစာတစ်ခု တတ်မြောက်ပြီးသွားရင် နောက်ထပ်သင်ခန်းစာအသစ်တစ်ခုကို သင်ယူရပြီး သင်ခန်းစာကျေညက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ အမှတ်ကောင်းကောင်း ရရှိကြသလိုမျိုး ဘဝသင်ခန်းစာတွေကို ကျေညက်တဲ့လူတွေဟာလည်း ဘဝမှာ နေထိုင်မှုပုံစံကောင်းပြီး စိတ်အေးချမ်းမှုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/24/2015 09:11:00 AM No comments:
ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ဖြစ်လာတဲ့အခါ မီးပိတ်ပြီး လှဲလှောင်းကာ အနားယူလိုက်ရုံ၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကို သောက်လိုက်ရုံနဲ့ သက်သာသွားတတ်ပေမယ့် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အစားအသောက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။
သင် ခေါင်းကိုက်တာက အရက်သောက်လို့ ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင် ညစာမှာ အာလူးမီးဖုတ်ကို ထည့်စားပေးပါလို့ အာဟာရပညာရှင် အယ်ရင်က ဆိုပါတယ်။ “အယ်လ်ကိုဟောဟာ ဆီးသွားစေတဲ့ အာနိသင်ရှိတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ် ခမ်းခြောက်နေစေရုံ သာမက ပိုတက်စီယမ်လို ဓာတ်ဆားတွေလည်း ဆုံးရှုံးနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိုတက်စီယမ် ပေါများစွာ ပါဝင်တဲ့ အစားအစာကို စားပေးတာက အရက်နာကျလို့ ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်တာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်” လို့ သူက ဆက်လက် ရှင်းပြပါတယ်။ မီးဖုတ်ထားတဲ့ အာလူးတစ်လုံးမှာ ပိုတက်စီယမ် ၇၂၁ မီလီဂရမ်တောင် ပါဝင်ပြီး ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးမှာ ၄၆၇ မီလီဂရမ်ပဲ ပါဝင်ပါတယ်။
ရေဓာတ် ခမ်းခြောက်မှုကြောင့် ခေါင်းကိုက်နေတာလား
ရေဓာတ် ခမ်းခြောက်တာက ခေါင်းကိုက်စေတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် ခေါင်းကိုက်နေရင် အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေး စားမယ့်အစား ရေဓာတ်များများပါတဲ့ ဖရဲသီးကို စားပေးပါ။ “သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထဲမှာ ပါတဲ့ ရေဓာတ်မှာ မဂ္ဂနီဆီယမ်လို သတ္တုဓာတ်တွေ ပါဝင်နေတာကြောင့် ခေါင်းမကိုက်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်” လို့ အာဟာရပညာရှင် စတယ်လာက ရှင်းပြပါတယ်။ ရေဓာတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားတဲ့ အသီးတွေက ဘယ်ရီသီး၊ သခွားသီး၊ ဖရဲသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ကော်ဖီအသောက်များရင် သွေးကြောတွေကို ကျဉ်းစေတာကြောင့် ခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ကဖင်းဓာတ်ဟာ ဆီးသွားစေတဲ့ အာနိသင်ရှိပြီး ရေဓာတ် ခမ်းခြောက်ကာ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးမြင့်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကော်ဖီ အသောက်များသူတွေ ကော်ဖီမသောက်ဘဲ နေလိုက်ရင် ခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ခန့် သောက်တာက အရက်သောက်လွန်တာကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်တာကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
ကောက်နှံတစ်ခုလုံး အစာကို စားပါ
ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျအောင် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပါတဲ့ အစာကို လျှော့စားနေသူတွေဟာ ခေါင်းကိုက်တာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သိုလှောင်ထားတဲ့ ဂလိုင်ကိုဂျင်တွေ ဆုံးရှုံးသွားလို့ပါ။ ဂလိုင်ကိုဂျင်က ဦးနှောက်ရဲ့ အဓိက စွမ်းအင် အရင်းအမြစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခွံချွတ်မထားတဲ့ ကောက်နှံစာတွေ ဖြစ်တဲ့ ဆန်လုံးညို၊ အညိုရောင် ခေါက်ဆွဲ၊ အညိုရောင်ပေါင်မုန့် စတာတွေကို စားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
အစာထဲမှာ ပါတဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်ဟာ သွေးကြောတွေကို အပန်းပြေစေပြီး ခေါင်းကိုက်တာကို သက်သာစေပါတယ်။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်နေရင် မဂ္ဂနီဆီယမ်ပါတဲ့ ထောပတ်သီး၊ မက်မွန်သီးခြောက်၊ ငှက်ပျောသီး၊ သီဟိုဠ်စေ့၊ ပဲသီးနဲ့ အစေ့အဆန်တွေကို စားသင့်ပါတယ်။
နှာခေါင်းပိတ်တာကြောင့် ခေါင်းကိုက်ရင် ငရုတ်ကောင်း၊ ချင်း(ဂျင်း) စတဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ပါတဲ့ အစာတွေကို စားပေးပါ။ ဒီအစာတွေက နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့တာကို ပွင့်စေတာကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာကို သက်သာစေပါတယ်။
သင့်ခေါင်းဟာ ထိုးထိုးကိုက်နေရင် ကယ်လ်စီယမ် လျော့နည်းတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဦးနှောက်က ထိထိရောက်ရောက် အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ ကယ်လ်စီယမ် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းကိုက်သက်သာအောင် ကယ်လ်စီယမ် ပါဝင်မှုများတဲ့ အဆီမပါ ဒိန်ချဉ်ကို စားပေးသင့်ပါတယ်။
ဟင်းနုနယ်ရွက်စားတာက သွေးတိုးကို ကျစေတာကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာကို သက်သာစေပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ဟင်းနုနယ်ရွက်သုပ် နှစ်ခွက်လောက် စားပေးရင် သွေးတိုးလို့ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်တာကို သက်သာစေပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/24/2015 09:09:00 AM No comments:
မင်္ဂလာပွဲကျင်းပတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူတွေကို ဖိတ်ရမလဲ၊ ဘယ်သူတွေကို ချန်ခဲ့ရမလဲဆိုတာ အမြဲခေါင်းစားတတ်ကြပါတယ်။ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့သူတွေ မကျန်ခဲ့အောင် စဉ်းစားကြရသလို ဒီလူကို ချန်ခဲ့ရမလား၊ စာရင်းထဲ ထည့်ရမှာလား ဆိုတာကလည်း တွေးရတောရတာ အမောပေါ့။ ဒီတော့ မင်္ဂလာဖိတ်စာ ပို့တဲ့အခါ မထည့်သင့်တဲ့ လူတွေအကြောင်း နည်းနည်းပြောပြပေးပါရစေ။
သင်နဲ့ သင့်ရဲ့ရည်းစားဟောင်းဟာ ခုချိန်ထိ သူငယ်ချင်းလို အဆက်အသွယ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တောင် သူလည်း ဒီဖိတ်စာရတဲ့အခါ စိတ်ထဲတစ်မျိုး ဖြစ်သွားနိုင်သလို၊ သူ ဒီပွဲတက်လာတဲ့အခါ သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်အနေနဲ့လည်း စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
၂။အပြင်မှာ မဆုံဖူးကြပေမယ့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်က သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို Like အမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့သူတွေ
သင်ဟာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ နည်းနည်းပေါ်ပြူလာဖြစ်တာမို့ သင့်ပုံတွေကို အမြဲတမ်း Like လုပ်နေသူတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကို သင့်မင်္ဂလာပွဲဖိတ်ဖို့လောက်ထိတော့ မစဉ်းစားပါနဲ့။ ဒါဟာ အူကြောင်ကြောင်နိုင်လွန်းပါတယ်။
၃။သင်နဲ့စကားမပြောဖြစ်တာ လေး၊ ငါးနှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်း
ခုနောက်ပိုင်း အဆက်အသွယ် ပြတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ တက္ကသိုလ်တုန်းက သူငယ်ချင်း၊ ဖုန်းတွေဘာတွေလည်း မပြော၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် chatting မှာတင် စကားတစ်ခွန်းမှ မပြောဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ဖိတ်ဖို့ သိပ်စဉ်းစားစရာ မလိုပါဘူး။
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းနဲ့ ကြိုက်လည်း မကြိုက်သေး၊ အီစီကလီအဆင့်လောက်သာ ရှိသေးတဲ့သူကို သင့်မင်္ဂလာပွဲ ဖိတ်ဖို့လောက်ထိ မတွေးပါနဲ့။ အပိုတစ်ယောက်အဖြစ် ခေါ်လာခိုင်းဖို့ စောပါသေးတယ်။
ကိုယ့်တိုက်ခန်းရဲ့ အောက်ခန်းကသူတွေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ မေးထူးခေါ်ပြောတောင် ရှိပါရဲ့လား။ ဘေးအိမ်က မိသားစုနဲ့ရော ညနေစာတူတူစားတာမျိုးတွေ ဘာတွ လုပ်ဖူးပါရဲ့လား။ မေးထူးခေါ်ပြောလောက်တောင် မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဖိတ်ရမယ့် စာရင်းထဲက ထုတ်လိုက်ပါ။
အလုပ်မှာ အတူဆိုပေမယ့် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စိတ်ထဲက မကျေနပ်ချက်တွေ ရှိနေပြီးသားသူတွေကိုလည်း သင့်မင်္ဂလာပွဲကို မဖိတ်ပါနဲ့။
၇။ထစ်ခနဲရှိ သူပဲဆိုလောက်အောင် ပြသနာရှာတတ်တဲ့သူ
အပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာ တစ်ခုခုဆို သူပဲ ဆိုလောက်အောင် ပြသနာတွေဖန်တီး၊ ရန်ပွဲတွေ ဖန်တီးတတ်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်လည်း မဖိတ်တာက ခပ်ကောင်းကောင်းပါ။ အဲ့ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ကိုယ့်ပွဲမှာ ကိုယ်မျက်နှာပျက်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံနိုင်တာကြောင့်ပါ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/24/2015 09:08:00 AM No comments:
ဆီးချိုရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ
ဝမ်းဗိုက်မှ အဆီပိုတွေကြောင့် ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နှုန်း မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ သုတေသနပြုသူတွေက သိထားကြပေမယ့် လေ့လာမှု အသစ်အရ အသည်းမှာ အဆီဖုံးတာကြောင့်လည်း ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အသည်းမှာ အဆီဖုံးရင် အသည်းမှ သွေးတွင်း သကြားဓာတ် တည်ငြိမ်မှု ရှိအောင် မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ သကြားအဆင့်တွေ မြင့်တက်လာပါတယ်။ အသည်းအဆီဖုံးတာကို nonalcoholic fatty liver (NAFLD)လို့ ခေါ်ပြီး များသောအားဖြင့် ဘာလက္ခဏာမှ မပြတတ်ပါဘူး။ အမေရိကန်လူမျိုး သုံးယောက်မှာ တစ်ယောက်နှုန်းဟာ အသည်းမှာ အဆီဖုံးရောဂါ ရှိနေတတ်ပြီး သင်လည်း အဲဒီအုပ်စုထဲမှာ မပါဝင်ရအောင် အောက်ပါတို့ကို ပြုလုပ်ကြည့်ပါ။(၁)
အစားအစာကို ထိန်းချုပ်စားပြီး အသည်းကို ပြုပြင်ပါ။
ကျွန်မတို့ရဲ့ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အဝလွန်နေတာကြောင့် အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ များနေတတ်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကို ၉ ရာခိုင်နှုန်းလောက် လျှော့ချနိုင်တာနဲ့ အသည်းအဆီဖုံးတာ သက်သာသွားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၇၀ ပေါင် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ရှိသူ တစ်ယောက်ဟာ ၁၅ ပေါင်လောက် လျော့သွားတာနဲ့ အသည်းအဆီဖုံးတာ လျော့သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ်စားတဲ့ အစာထဲမှ ၁၄၅ ကယ်လိုရီ လျှော့စားလိုက်ပါ။ နေ့စဉ် အချိုရည် တစ်ဘူး၊ အိုက်စကရင်ခွက် လေးပုံတစ်ပုံစာ ဒါမှမဟုတ် အာလူးကြော် တစ်ထုပ်စာ လျှော့စားပေးရင် တစ်နှစ်အကြာမှာ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၅ ပေါင် လျော့သွားနိုင်ပါတယ်။
(၂) အသည်း ကျန်းမာအောင် ထောပတ်သီး စားပါ
တစ်ပတ်ကို ထောပတ်သီး နှစ်လုံး စားပေးတာဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ကျန်းမာရေးကောင်းစေတဲ့ အဆီတွေ မြင့်မားစွာရှိနေတာကြောင့် အသည်းရောင်ရမ်းတာ ထပ်မဖြစ်တော့ဘဲ အရင်က ရှိနေတဲ့ ရောင်ရမ်းတာတွေလည်း လျော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်။
(၃) ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ များလာအောင် ဝိုင်အနီ သောက်ပါ
သင့်အသည်း ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ အရက် လုံးဝ မသောက်ရပါဘူးလို့ အရင်က ဆိုထားပေမယ့် အခုအခါမှာ ကျွမ်းကျင်သူတွေက နေ့စဉ် ဝိုင်အနီ အရက်ကို လေးအောင်စ သောက်ပေးရင် အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ထက်ဝက်ခန့် လျော့ကျသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အနီရောင်ဝိုင်မှာ အသည်းကို အာဟာရဖြစ်စေမယ့် Resveratrol တွေ မြင့်မားစွာ ပါဝင်လို့ပါ။
(၄) အဆီဖုံး ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၄၃ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချနိုင်အောင် Milk Thistle သောက်ပါ
လေ့လာမှုတွေ အများအပြားအရ milk Thistle ဟာ ကျန်းမာတဲ့အသည်း Cell အသစ်တွေ ကြီးထွားမှုကို မြန်စေတာကြောင့် အသည်းပြဿနာ ဖြစ်နှုန်း ၄၃ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချနိုင်ပြီး အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ ရှိသူတွေရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း သက်သာစေနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
(၅) လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပါ
မိမိခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကျဆင်းအောင် လမ်းလျှောက်တာ၊ ရေကူးတာ ဒါမှမဟုတ် တခြား လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အသည်းလုပ်ငန်း ပိုကောင်းလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့် အသည်းအတွင်း အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ သွေးစီးဆင်းမှု ကောင်းစေတာကြောင့် အသည်းဟာ သူ့လုပ်ငန်းကို စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Credit: Good Health
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/24/2015 09:03:00 AM No comments:
ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာမဆို စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ သိထားသင့်တဲ့ နည်း (၅)သွယ်
လူတစ်ယောက် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ခံစားနေရတဲ့အခါ စိတ်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံး တည်ငြိမ်အောင်ထားကာ ဖြစ်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာပါ။ ဒီလိုပြောတဲ့အခါ ပြောတာတော့ လွယ်တာပေါ့လို့ ထင်စရာရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချနိုင်မယ့် နည်းလေးတွေ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက် စိတ်ပင်ပန်းပင်ပန်း သီချင်းသံစဉ်တွေကြားလိုက်ရင်တော့ အဲ့ဒီဖိစီးမှု၊ ပင်ပန်းတာတွေ လျော့ကျသွားတာချည်းးပါပဲ။ ဒီတော့ သင်သွားနေတဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း ဖိစီးမှုတွေရှိနေရင် အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေ ဖွင့်နားထောင်လိုက်ပါ။ မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ သင့်စိတ်တွေ ကြည်လင်လာပါလိမ့်မယ်။
အစည်းအဝေးတွေ၊ အလုပ်စာရင်းဇယားတွေနဲ့ အာရုံတွေ နောက်နေရပြီဆိုရင် အလွယ်ကူဆုံး ဖိစီးမှုလျှော့ချနည်းကတော့ သင့်လက်နှစ်ဖက်ကို ဘယ်နဲ့ညာယူလိုက်ပြီးအပေါ်ကို ဆန့်တန်းလိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းယိမ်းလိုက်၊ ညာဘက်ကိုနည်းနည်းယိမ်းလိုက် လုပ်ပြီး ခေါင်းကိုလည်း အရှေ့၊ အနောက် ငိုက်ချပြီး ဘေးဘက်ကိုလည်း ညီမျှစွာ ငိုက်ချပေးပါ။ ခေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သလိုပါပဲ။ ဒီလို သင့်ခန္ဓာကိုယ်အနားပေးတာဟာ စိတ်တွေပြန်လန်းဆန်းအောင် လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ အတူတူပါပဲ။
အိမ်မှာ အိမ်မှုကိစ္စလေးတွေ ကူလုပ်ပေးရတဲ့အခါ၊ ဟိုပြေးဒီပြေး တောက်တိုမယ်ရအလုပ်လေးတွေ လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း စိတ်ပိုမိုငြိမ်းချမ်းသွားအောင်၊ ရှိနေတဲ့ ဖိစီးမှုတွေနည်းသွားအောင် လုပ်လို့ရတာပါပဲ။ အဲ့ဒါကတော့ ဥပမာ သင်က ပန်းကန်ဆေးနေတယ်ဆိုရင် သင့်လက်နဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ ရေအေးအေးလေး၊ ဒါမှမဟုတ် နွေးနွေးလေးရဲ့ ထိတွေ့မှုကို သတိပြုရင် ဆပ်ပြာရနံ့လေးကို ရှုရှိုက်ကာ အပန်းဖြေပါ။ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို ပိုအာရုံစိုက်ရင်း ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို တစ်ခုချင်းစီ မှတ်သားတာမျိုးပါ။ ဒါဟာ စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့ အများကြီး ကူညီပေးပါတယ်။
တစ်နေ့လုံး အလုပ်တွေ ပင်ပန်းပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ ညစာစားရတော့မှာပါလား။ ညစာစားနေတုန်း ဖိစီးမှုတွေလျှော့ချနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ အစားအစာကို ပထမဆုံး တစ်လုပ်စားပြီးတာနဲ့ ကိုယ်စားနေတဲ့ ဟင်းရဲ့အနံ့ကို ခံစားကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီအစားအသောက်၊ ဟင်းထဲမှာ ဘာတွေပါဝင်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားရင်း စိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်ပါ။ အဲ့ဒီနောက်မှာ သင်ဟာ ပထမဆုံး မစားခင်အချိန်ထက် စိတ်ငြိမ်သွားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လောက်ဆိုးရွာတဲ့နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နေ့လုံးမှာ သေးရင်သေးမယ်၊ ကြီးရင်လည်းကြီးမယ် ကောင်းတဲ့အကွက်လေးတစ်ကွက်တော့ ရှိစမြဲပါ။ ဒီတော့ မအိပ်ခင် ငါဒီနေ့လုပ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေထဲမှာ ဘာလေးကတော့ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်၊ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လိုအကျိုးပြုပေးလိုက်တယ် စသဖြင့် တွေးပါ။ ကောင်းမွန်တဲ့အတွေးဟာ သင်အိပ်စက်တဲ့အခါ အများကြီး အထောက်အကူပြုတာ သင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/24/2015 09:01:00 AM No comments:
ငါးအရိုးမျက်လျှင် အတော်ကို ခံစားရခက်သည်မှာ အားလုံးလည်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ တစ်ခါတရံ ခဏလေးနဲ့ ပျောက်သွားပေမယ့် အခန့်မသင့်လျှင် ဆေးရုံတက်ပြီး လည်ချောင်းကနေ ခွဲထုတ်ရတဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ငါးအရိုးမျက်လျှင် အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မယ့် အိမ်တွင်းကုထုံးလေးများကို ရသမျှစုစည်း၍ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေရာနည်းကို ပြုလုပ်နိုင်ကြပါတယ်။
(၁) သံပုရာသီးကို အခွံမာများခွါ၍ အလုံးကို သွားကြားထိုးသံဖြင့် အပေါက်လေးများ ထိုးဆွထား၍ ခေတ္တမျ ငုံထားပါ။ အရည်ကို တဖြေးဖြေး မျိုချပေးပါ။ အချဉ်ဓါတ်က ငါးရိုးများကို တိုက်စားသွားပေလိမ့်မည်။
(၂) ငှက်ပျောသီး စားပါ။ ဘာငှက်ပျောသီးဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေပါသည်။
(၃) ကြက်ဥအကာကို သောက်ပေးပါ။ ငါးရိုးသည် အချွဲများနှင့်အတူ ကျသွားမည်။
(၄) သံပုရာသီး သို့မဟုတ် သံပုယိုသီးကို ၄ စိတ်ခွဲ၍ ပါးစပ်ဟကာ အာခေါင်ထဲကို တစ်စိတ်ချင်းစီ အရည်ညျစ်၍ သံပုရာရည်ကို ခေတ္တငုံထားပါ။ ပြီးမှ ရေသောက်လိုက်ပါ။ ငါးရိုးမျက်ခြင်း ပျောက်ကင်းသွားလိမ့်မည်။
(၅) ဇီးဖြူသီးကို အလုံးလိုက် ၀ါးစားပြီး အရည်ရော အဖတ်ပါ မျိုချပါ။ ငါးရိုးများ အရည်ပျော်ကျသွားပါလိမ့်မည်။
(၆) ရေများများ သောက်ပါ။ သောက်ရေထဲကို ဆားအနည်းငယ် ခတ်၍ သောက်ပါ။ ဆားဓါတ်က ငါးရိုးကို အမြတ်ချေဖျက်ပေးနိုင်ပါသည်။
(၇) သံလွင်ဆီအနည်းငယ်ခန့်ကို သောက်ပါ။ ငါးရိုးများ ဆီနှင့်အတူ လျှောကျသွားမည်။ လည်ချောင်းနာလည်း ပျောက်မည်။
(၈) လိမ္မော်ရည်၊ သံပုရာရည်တို့ကို ဖျော်သောက်ပါ။ ၄င်းတို့မှာ ပါဝင်သည့် Citric Acid က ငါးရိုးများကို အမြန်ကျေသွားစေပါသည်။
(၉) ယခုခေတ်တွင် ပေါများနေသော Coke, Pepsi စသည့် ဂက်စ်ပါဝင်သည့် အချိုရည်တို့ကို သောက်ပါ။ ငါးရိုးကို အမြန်ပျော့သွားစေပါသည်။
ငါးရိုးမျက်နေစဉ် လည်ချောင်းအပြင်ဘက်မှ ဖိခြင်း၊ နှိပ်နယ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ငါးရိုးမျက်၍ ဒုက္ခရောက်သူများအတွက် ဒီ Post လေးကို Share ပေးနိုင်ကြပါတယ်။ အားလုံးပဲ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းနိုင်ကြပါစေ။
ကိုးကား - ရိုးရာဆေးမြီးတိုများ
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/24/2015 09:00:00 AM No comments:
ပုန်းကွယ်နေသည့် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကို အောင်နိုင်မှု ရှိစေရန်
နှလုံးရောဂါနဲ့ ပတ်သက်လာရင် လူအများစုဟာ ကိုလက်စထရောကိုသာ ဂရုစိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဆီတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ထရိုင်ဂလစ်စရိုက (TGs) ခေါ်တဲ့ မကောင်းတဲ့ အဆီကလည်း နှလုံးရောဂါအတွက် အထူး အရေကြီးပါတယ်။ မကောင်းတဲ့အဆီ (TGs) တွေ များလွန်းနေရင် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ နှစ်ဆ ပိုများသွားပါတယ်။ သွေးအတွင်း မကောင်းတဲ့အဆီ (TGs) အဆင့် ထက်ဝက်လောက် ကျဆင်းအောင် ၁၅ မိနစ်ခန့်သာ အချိန်ယူပြီး အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၁။ သစ်ကြံပိုးခေါက် အသုံးပြုပြီး TGs အဆင့်ကျဆင်းအောင် ပြုလုပ်ပါ
ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင်ပစ္စည်း မြင့်မားစွာ ပါဝင်တဲ့ သစ်ကြံပိုးခေါက်ဟာ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်တွေကို (TGs) အဆင့် မပြောင်းခင်မှာပင် ကြွက်သားတွေမှ စုပ်ယူမှုနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှု မြင့်မားအောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်။ သစ်ကြံပိုးခေါက်အမှုန့် နေ့စဉ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်စာ စားသုံးတာကြောင့် တစ်လအတွင်း TGs အဆင့် ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ဟာလည်း TGs အဆင့်ကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် ငရုတ်ကောင်းမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ရှစ်ပုံတစ်ပုံစာ စားတာကြောင့် TGs ထုတ်လုပ်မှု ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။
၂။ TGs မြင့်တက်မှုမရှိအောင် စပျစ်သီးခြောက်နဲ့ အခွံမာသီး စားပါ
သုတေသန ပြုလုပ်ချက်အရ အဖြူရောင်ပေါင်မုန့်နဲ့ အချိုစာလိုမျိုး နူးညံ့တဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေကို စားအပြီးမှာTGs အဆင့်တွေ များစွာ မြင့်မားလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အသည်းမှ ပိုလျှံနေတဲ့ ကယ်လိုရီတွေကို သွေးကြောတွေ ပိတ်ဆို့မှု ရှိစေနိုင်တဲ့ TGs အဆင့်ကို ပြောင်းလဲပေးတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှ အထူး ကုဆရာဝန်က ပြောပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှ စုပ်ယူမှုနည်းစေတဲ့၊ အမျှင်ဓာတ်ပါ ပါဝင်တဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် (ဥပမာ ကောက်နှံတစ်ခုလုံး ပါဝင်စာ) ဒါမှမဟုတ် သစ်သီးခြောက်၊ အခွံမာသီးနဲ့ အစေ့အဆန်လိုမျိုး ကျန်းမာစေတဲ့ အဆီ ပါဝင်တဲ့ အစာတွေကို နေ့စဉ် စားသုံးတာကြောင့် ခြောက်နာရီအတွင်းမှာ TGs ထုတ်လုပ်မှု ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
၃။ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပြီး TGs တွေ လောင်ကျွမ်းအောင် ပြုလုပ်ပါ
နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀ ခန့် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်တာကြောင့် TGs အဆင့် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ အခု နောက်ဆုံး သုတေသန ပြုလုပ်ချက်အရ လေ့ကျင့်ခန်း ၁၀ မိနစ်ခန့် လုပ်ရင်တောင် TGs အဆင့် ထိထိရောက်ရောက် ကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အမှန်မှာတော့ အချိန်တို လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာဟာ TGs အဆင့်မြင့်မားတာကို လျှော့ချဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းပါ။ ပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်တာကြောင့် အစာတွေ ပိုစားမိပြီး အချိန်တို လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ TGs အဆင့်ထက် တစ်ဝက်ခန့်သာ ကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၄။ TGs ဖြိုခွဲမှုမြန်အောင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်ပါ
အမျိုးသမီးအများစုအနေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များတဲ့အခါမှာ TGs တွေ လောင်ကျွမ်းဖို့ ခက်ခဲသွားတတ်ပြီး ဒီအဆီတွေဟာ သွေးကြောအတွင်းမှာ ပုံမှန်ထက် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း အချိန်ပိုကြာပြီး ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းဟာ သင်ရဲ့ များပြားတဲ့ အလုပ်ချိန်အတွင်းမှာ သင် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ ဖတ်ဖို့ပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ရတာကြောင့် သင်ရဲ့ ဖိစီးမှုအဆင့် ထက်ဝက်ခန့် ကျဆင်းနိုင်ပြီး သင်ရဲ့ TGs အဆင့်လည်း ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။
၅။ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ အများအပြားရအောင် သစ်သီးစားပါ
ပန်းရောင် ဂရိတ်ဖရုသီး တစ်ဝက် ဒါမှမဟုတ် ကီဝီသီး နှစ်လုံးကို နေ့စဉ် စားသုံးတာကြောင့် တစ်လအတွင်း TGs အဆင့် ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပန်းရောင်ဂရိတ်ဖရုသီးမှာ လိုင်ကိုပင်းနဲ့ Rutin ခေါ်တဲ့ ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ နှစ်မျိုးပါဝင်ပြီး အဆီတွေကို TGs အဆင့် မပြောင်းလဲနိုင်အောင် ပိတ်ပင်နိုင်ပါတယ်။ ကီဝီသီးဟာ အစာခြေစနစ်အတွင်း နှေးကွေးစွာ စုပ်ယူမှုရှိအောင် ကူညီနိုင်တာကြောင့် သွေးတွင်း သကြားဓာတ် မမြင့်အောင် ပိတ်ပင်နိုင်ပါတယ်။
၆။ လက်ဖက်ရည်သောက်ပြီး မုန့်ချိုအိတ် ကျန်းမာအောင် ကူညီပါ
လက်ဖက်ရည်ကြမ်း ဒါမှမဟုတ် လက်ဖက်ရည်ချို တစ်ခွက်ကို အစာနဲ့အတူ တွဲပြီး သောက်တာကြောင့် ၂၄ နာရီအတွင်း TGs အဆင့် လျော့နည်းနိုင်ပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်မှာ ပါဝင်တဲ့ အပင်ဒြပ်ပေါင်းတွေဟာ မုန့်ချိုအိတ်မှ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်တွေကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်အောင် ကူညီနိုင်တဲ့အတွက် ပိုလျှံတဲ့ သကြားတွေဟာ TGs အဆင့်ကို မပြောင်းလဲနိုင်တော့ပါဘူး။ တကယ်လို့ လက်ဖက်ရည်ကို အချိုရည်အစား သောက်သုံးမယ်ဆိုရင် ပိုမိုအကျိုးထိရောက်မှု ရှိပါတယ်။ အချိုရည်တွေဟာ စုပ်ယူနိုင်မှု မြန်ဆန်တဲ့အတွက် TGs အဆင့်တွေ မြင့်တက်အောင် လှုံ့ဆော်နိုင်လို့ပါ။ သင်ရဲ့ TGs အဆင့်တွေဟာ အမှတ် ၁၀၀ လောက် မြင့်တက်နေရင်တောင် ဆော်ဒါအချိုရည်တွေကို ရှောင်ရှားလိုက်တာကြောင့် သုံးလအတွင်းမှာ TGs အဆင့် ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ထိန်းနိုင်ပါတယ်။
၇။ မှန်ကန်တဲ့ ဆေးအမျိုးအစားကို သုံးပါ
သင်ဟာ သန္ဓေတားဆေး ဒါမှမဟုတ် ဟော်မုန်းအစားထိုး ကုသမှု ခံယူနေရပြီး သင်ရဲ့ TGs အဆင့်တွေ မြင့်မားနေရင် ဆေးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အီစထရိုဂျင်တွေဟာ အသည်းမှ တစ်ဆင့် TGs ထုတ်လုပ်မှု များစေနိုင်လို့ပါ။ သန္ဓေတားဆေးနဲ့ ဟော်မုန်း အစားထိုးကုသမှုကြောင့် TGs အဆင့် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဟော်မုန်းကပ်ခွာသာ အသုံးပြုပါ။ ကပ်ခွာမှာ ပါဝင်တဲ့ အီစထရိုဂျင်တွေဟာ အရေပြားမှတစ်ဆင့် သွေးကြောအတွင်း တိုက်ရိုက် ရောက်ရှိသွားနိုင်တာကြောင့် အသည်းကို ဖြတ်သန်းမှု မရှိလို့ပါ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/24/2015 08:57:00 AM No comments:
အိပ်မက်ဆိုတာ လူတိုင်းမက်လေ့ရှိတဲ့ အရာပါ။ အိပ်မက်မက်ခဲ့မှန်း သိပေမယ့် ဘာကို မက်လို့မက်မှန်း မသိအောင် စဉ်းစားလို့မရတဲ့ အဖြစ်တွေ ရှိကောင်းရှိပေမယ့် ပီပီသသနဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လို ထင်ကျန်ရစ်တဲ့ အိပ်မက်တွေလည်း ရှိကြမှာပါ။ ကျွန်မတို့တွေ အိပ်တဲ့အခါ မက်လေ့ရှိတဲ့ အိပ်မက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေကို လေ့လာမှုတွေက အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
(၁) သင်ဟာ အိပ်မက်ရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို မေ့သွားပါတယ်
အိပ်ရာနိုးပြီးအချိန် ငါးမိနစ်အတွင်းမှာ အိပ်မက်တွေရဲ့ တစ်ဝက်ခန့်က မေ့သွားတတ်ပါတယ်။ အချိန် ၁၀ မိနစ် ကြာသွားတာနဲ့ အိပ်မက်တွေရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက မေ့သွားတတ်ပါတယ်။
(၂) မျက်စိ မမြင်သူတွေကလည်း အိပ်မက်မက်ပါတယ်
မွေးပြီးမှ မျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေဟာ အိပ်မက်ထဲမှာ ပုံရိပ်တွေကို မြင်မက်နိုင်ပါတယ်။ မွေးရာပါ မျက်စိမမြင်သူတွေကတော့ ဘာပုံရိပ်ကိုမှ မမြင်မက်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တခြား အသံ၊ အနံ့၊ ထိတွေ့မှုနဲ့ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ အာရုံခံစားမှုတွေကတော့ အိပ်မက်ထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။
(၃) လူတိုင်း အိပ်မက်မက်ဖူးပါတယ်
လူသားတိုင်း (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာ အပြင်းအထန်ရှိသူကလွဲရင်) အိပ်မက် မက်ဖူးကြပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အိပ်မက် မမက်ဖူးဘူးလို့ ထင်နေရင် ဒါက သင့်အနေနဲ့ အိပ်မက်တွေကို မေ့သွားတာပါ။
(၄) အိပ်မက်တွေထဲမှာ ကျွန်မတို့ သိပြီးသား မျက်နှာတွေကိုပဲ မြင်ပါတယ်
စိတ်ဟာ မျက်နှာပုံရိပ်တွေကို တီထွင်ပြီး မမြင်တတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ရဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာ ဘဝမှာ မြင်ဖူးထားတဲ့သူတွေရဲ့ တကယ့် မျက်နှာတွေကိုပဲ မြင်မက်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဘဝ တစ်လျှောက်မှာ မျက်နှာပေါင်း ထောင်သောင်းကျော်တဲ့အထိ မြင်ဖူးကြပြီး အိပ်မက်မက်တဲ့ အချိန်အတွင်း ဦးနှောက်ဟာ အဲဒီမြင်ဖူးပြီးသားသူတွေကို အသုံးချပြီး မက်လေ့ ရှိပါတယ်။
(၅) လူတိုင်းတော့ အရောင်တွေကို အိပ်မက်မမက်ပါဘူး
မျက်စိမြင်တဲ့သူတွေရဲ့ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့်က အဖြူနဲ့ အမည်းကိုပဲ အိပ်မက် မက်လေ့ ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေက အရောင်တွေကို အိပ်မက် မက်ကြပါတယ်။ ၁၉၁၅မှ ၁၉၅၀ အတွင်း လေ့လာမှုတွေအရ အိပ်မက်အများစုဟာ အဖြူနဲ့ အမည်းရောင်တွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၆၀ မှာတော့ လေ့လာမှု ရလဒ်က ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ အသက် ၂၅ နှစ်အောက် ငယ်သူတွေမက်တဲ့ အိပ်မက် ၄ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းကသာ အဖြူရောင်နဲ့ အမည်းရောင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ပြောင်းလဲလာတာက အဖြူ-အမည်း ဇာတ်လမ်းတွေကနေ ရောင်စုံဇာတ်လမ်းတွေကို ပြောင်းလဲလာတာနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိတယ်လို့ လတ်တလော လေ့လာမှုတွေက ဆိုပါတယ်။
(၆) အိပ်မက်ဆိုတာ လက်တွေ့ကို ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ထားတာ ဖြစ်တယ်
ကျွန်မတို့ရဲ့ စိတ်ဟာ အိပ်ပျော်နေစဉ် ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုတွေကို ဘာသာပြန်ပြီး အိပ်မက်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ထည့်မက်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အိပ်မက်ထဲမှာ ပြင်ပက ကြားနေရတဲ့ အသံတွေကိုထည့်ပြီး မက်တတ်တာမျိုးပါ။ ဥပမာပြောရရင် သင်အိပ်ပျော်နေစဉ် အနားမှာ သင့်အစ်ကိုက ဂီတာတီးပြီး သီချင်းဆိုနေပါက သင်ဟာ တေးဂီတပွဲတစ်ခုကို ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အိပ်မက်ကို မက်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) အိပ်မက်ဆိုတာ စိတ်ခံစားမှုဖြစ်တယ်
အိပ်မက်ထဲမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ အတွေ့ရအများဆုံး အချက်က စိတ်ပူပင်သောက ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာ မကောင်းတဲ့ စိတ်ခံစားမှု အကြောင်းက ကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုထက် ပိုများပါတယ်။
(၈) အိပ်မက်တစ်မျိုးတည်းကို ထပ်ခါတလဲလဲ မက်တတ်ပါတယ်
အိပ်မက်အများစုမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက တစ်ကြိမ်လောက်ပဲ ရှိပေမယ့် လူအများစုဟာ အိပ်မက်တစ်ခုတည်းကိုပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ မက်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီး ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း အထက်နဲ့ အမျိုးသား ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းတို့က အိပ်မက်တစ်ခုတည်းကို ထပ်ခါတလဲလဲ မက်လေ့ ရှိပါတယ်။
(၉) တိရစ္ဆာန်တွေလည်း အိပ်မက် မက်ကြပါတယ်
တိရစ္ဆာန် အမျိုးမျိုးကို လေ့လာတဲ့ လေ့လာမှုတွေအရ တိရစ္ဆာန်တွေ အိပ်ပျော်စဉ်မှာ ထွက်ရှိတဲ့ ဦးနှောက်လှိုင်းတွေဟာ လူတွေအိပ်ပျော်စဉ် ထွက်ရှိတဲ့ ဦးနှောက်လှိုင်းတွေနဲ့ တူညီတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ခွေးတစ်ကောင် အိပ်နေတာကို စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ အိပ်မက်ထဲမှာ တစ်စုံတစ်ခုနောက်ကို လိုက်နေစဉ် ပြေးနေသလိုမျိုး ခြေဖဝါးတွေ လှုပ်ရှားတာ၊ အသံဟစ်အော်တာတွေ လုပ်တတ်ပါတယ်။
(၁ဝ) အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမက်တဲ့ အိပ်မက်တွေက မတူကြပါဘူး
အမျိုးသားတွေက တခြားအမျိုးသားတွေအကြောင်း ပိုပြီး အိပ်မက် မက်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ အိပ်မက်ထဲက ဇာတ်ကောင် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ တခြားအမျိုးသားတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာတော့ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးအရေအတွက် ညီမျှနေတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေက သူတို့ရဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာ ရန်လိုတဲ့ စိတ်ခံစားမှု ပိုရှိနေတတ်ပါတယ်။
Credit : thabawaarrin
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/24/2015 08:56:00 AM No comments:
သင် English စာလေ့လာနေပါသလား? တစ်ခါတလေ စာအုပ်တွေချည်းပဲ
ဖတ်ရတာမငြီးငွေ့ဘူးလား။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့လိုငြီးငွေ့လာရင် ရုပ်ရှင်ကြည့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပျော်သက်သက်ပဲကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ Englishစာတိုးတက်အောင်ဗဟုသုတ တစ်ခုခုရအောင်ကြည့်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ Movie ဆိုတာ Englishစာကိုသိသိသာသာတိုးတက်လာစေနိုင်တဲ့ လက်နက်တစ်ခုမှန်း တော်တော်များများကမသိကြပါဘူး။
အပျော်သဘောအဖြစ်သာကြည့်ကြတာများပါတယ်။သင့်Englishစာ တိုးတက်အောင်Movieကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲ? ကျွန်တော် သိသလောက်နည်းလမ်းလေးတွေ မျှဝေပါရစေ။
• ရုပ်ရှင်ကြည့်ခါနီးတို်င်း ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုအတွက်မဟုတ်ပဲ Englishစာတိုးတက်ချင်လို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထားပါ။ ဒါကသင့်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အများစုက ရုပ်ရှင်ကိုအပျော်သက်သက် ရသသက်သက်သာကြည့်ချင်ကြတာလေ။ ဒါပေမဲ့ သင် Englishစာတိုးတက်ချင်တယ် မဟုတ်လား? ဆိုရိုးတစ်ခုရှိပါတယ်။
“သင်အရင်က မရဘူးတဲ့အရာတွေလိုချင်ရင် သင်မလုပ်ဖူးတဲ့အရာ တွေလုပ်ရမယ်” တဲ့။
အရင်တုန်းက Englishစာပေါ်အာရုံမစိုက် ခဲ့လဲအခုကစပြီး Englishစာပေါ်အာရုံစိုက်လိုက်တော့နော်။
• ပထမဆုံးအနေနဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကို သင့်ရဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်တစ်အုပ်လို သဘောထားပါ။
ပထမဆုံးတစ်ခေါက်မှာ မြန်မာစာတမ်းထိုးနဲ့ကြည့်ပါ။ သင်ဟာရုပ်ရှင်တစ်ကားကြည့်တယ်ဆိုတာထက်
Englishစာလေ့လာနေတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတော်တော်များများကကြည့်ပြီးတဲ့ကားကိုပြန်မကြည့်ချင်လို့ပါပဲ။ ပထမဆုံးတစ်ခေါက်မှာတော့ Englishစာပေါ်အရမ်းကြီး
• သင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ရပါမယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ English စာတန်းထိုးနဲ့ ကြည့်ပါ။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ မှတ်စုစာအုပ်လေး၂အုပ်ထား ထားပါ။ တစ်အုပ်ကရုပ်ရှင် ထဲကပြောတဲ့ အသုံးများတဲ့
လက်တွေ့စကားပြောမှာ အသုံးကျနိုင်တဲ့ ၀ါကျတွေကို အဲဒိ ၀ါကျအတိုင်းမှတ်ဖို့ပါ။
“ဥပမာ … e.g.1 Anybody home? e.g.2 Tell me about it! (ငါ့ကို အဲဒိအကြောင်းပြောပြစမ်းပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ သုံးတဲ့အခါရှိသလို တစ်ယောက်ယောက် ပြောတာကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ “မှန်လိုက်လေကွာ”ဆိုတဲ့
အဓိပ္ပါယ်နဲ့သုံးတဲ့အခါလည်းရှိပါတယ်။အသံအနိမ့်အမြင့် နေရာအနေ အထားပေါ်မူတည်ပြီးအဓိပ္ပါယ်ပြောင်းလဲပါတယ်။) အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ အတိုဝါကျလေးတွေကိုစာအုပ်ထဲမှာမှတ်ထားပါ။
တစ်ချို့ကအဲဒိအဆင့်မှာတင်ရပ်သွားကြပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာမှတ်ရုံနဲ့မရပါဘူး။ ပါးစပ်ကနေပြောမှမှတ်မိမှာပါ။သင်တက်နေတဲ့ English စာသင်တန်းတစ်ခုခုရှိပါသလား၊ဒါမှမဟုတ် လေ့ကျင့်ဖော်လေ့ကျင့်ဖက် ရှိပါသလား။သင်စကားပြောတဲ့အခါ အခါအခွင့်သင့်တိုင်း သင့်မှတ်စုစာအုပ်ထဲက ၀ါကျလေးတွေကို ခနခနသုံးပေးပါ။မကြာခင် မှာထိုဝါကျလေးများကို သင့်ရဲ့နှုတ်မှာအလိုလိုစွဲသွားပါလိမ့်မယ်။သင်တန်းလဲတက်မနေဘူး
လေ့ကျင့်ဖော်လဲရှိမနေဘူးဆိုလဲ စိတ်မပူပါနဲ့။ မှန်ရှေ့ရပ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုလေ့ကျင့်ပါ။တစ်ခုခုကိုပြင်းပြင်းပြပြမလိုချင်သ၍ သင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။မရှက်ပါနဲ့။ သင့်ဘ၀တိုးတက်ဖို့လုပ်နေတာပါ။
• မှတ်စုစာအုပ်၂အုပ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက် ကျန်တဲ့တစ်အုပ်ကဘာလုပ်ဖို့လဲပြောပြ ရအုံးမယ်။ကျန်တဲ့တစ်အုပ်က ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးအသစ်လေးတွေကို မှတ်ဖို့ပါ။ သင်မသိတဲ့စာလုံးအသစ်တစ်လုံးတွေ့တာနဲ့ ရုပ်ရှင်ကိုချက်ချင်းရပ်ပီးရင် ထိုစာလုံးကို Dictionaryထဲမှာရှာပါ။ ပီးရင်မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာမှတ်ပါ။
မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ မှတ်တဲ့အခါမှာလဲ ဒီအတိုင်းကြီးစာလုံးတစ်ခုပဲမမှတ်ပါနဲ့။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့ဝါကျတစ်ခုလုံးကိုပါကူးထည့်ပါ။ ရုပ်ရှင်ကိုရပ်လိုက်စာလုံးအသစ်တွေဝါကျတွေ ကူးလိုက်၊၀ါကျအသစ်တွေကူးလိုက်နဲ့ရုပ်ရှင်ကမပြီးနိုင်ဘူးဖြစ်နေလဲမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ တနေ့တည်းအပြီးကြည့်ရမယ်လို့ ဥပဒေမှမထုတ်ထားတာ။
Study Hour ၁နာရီ ၂နာရီလောက်ဆိုရပ်ထားပြီး နောက်နေ့မှဆက်ကြည့်ပေါ့။ မအားဘူးလို့တော့ကျွန်တော့်ကိုဆင်ခြေမပေးပါနဲ့။ Candy Crash တောင်Level ၁၀၀ကျော်နေပီမဟုတ်လား?
• အရေးဆုံးအချက်ကတော့ သင့်မှတ်စုစာအုပ်ထဲကစာလုံးတွေကို သင်English စကားပြောတိုင်းအခါအခွင့်သင့်သလို သုံးပေးပါ။ သင်အသုံးမပြုရင်တော့ သင့်ဗလာစာအုပ်ဖိုးနဲ့ သင့်ဘောပင်ဖိုးရယ်သင့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်အချို့ ကိုသင်ဖြုန်းတီး ပစ်လိုက်တာထက်ဘာမှမပိုပါဘူး ။
စာအုပ်ထဲကစာလုံးတွေက စာအုပ်ပေါ်မှာပဲရှိနေ မှာပါ။ သင်အသုံးမပြုသ၍
• Dictionary ကတော့ Oxford Advanced Learner’s Dictionary ကို သုံးစေချင်ပါတယ်။English to English Dictionaryကိုသုံးစေချင်တယ်။ Englishစာလေ့လာသူတော်တော်များများကEnglish to English Dictionary ကိုကြောက်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။စာလုံးတစ်လုံးမသိလို့ရှာလိုက်တိုင်း
ရှင်းပြထားတဲ့ စာလုံးကိုထပ်ရှာတာနဲ့ တိုင်ပတ်နေတယ်လို့ ဆင်ခြေပေးကြတယ်။
ဘယ်သူကစစချင်း နားလည်မှာလဲ။ ကျွန်တော်လဲဒီလိုပါပဲ အစကတော့တိုင်ပတ်တာပေါ့။နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခေါင်းထဲမှာမသိမသာ စာလုံးတွေအများကြီး သိလာတယ်။
နောက်ဘယ်စာလုံးကြည့်ကြည့်အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ဇွဲရှိရှိနဲ့ English to English Dictionaryကိုပဲသုံးစေချင်ပါတယ်။ ( ကျွန်တော့်ရဲ့အမြင်သာဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာဆုံးဖြတ်ပြီး အဆင်ပြေတာကိုသုံးပါ)
• ကဲစာလုံးတွေ ၀ါကျတွေမှတ်တဲ့ကိစ္စပြီးပြီဆိုတော့ listening အကြောင်းနည်းနည်းပြောပါမယ်။Movieကြည့်လို့ရတဲ့အကြီးအမားဆုံး အကျိုးကျေးဇူးထဲမှာ Listeningတိုးတက်တာပါပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သင်ကပြောမှာပေါ့။ သင်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာကြာပါပီ Listening Skill လဲမတက်ပါဘူးလို့သင်ပြောချင်ပြောမှာပါ့။ အဲဒါကသင် Englishပေါ်ကို အာရုံမစိုက်ခဲ့လို့listening skill မတက်တာပါ။အခုကစပီး ရုပ်ရှင်ကြည့်တိုင်း Englishစာပေါ် အာရုံစိုက်ကြည့်ပါ။သင့်English Listening အရည်အသွေး
•ရုပ်ရှင်ကိုEnglishစာတမ်းထိုးနဲ့လဲကြည့်ပြီးသွားပီဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်အနေနဲ့ စာတန်းထိုးမပါပဲဒီအတိုင်းကြည့်ပါ။ သူတို့ပြောတာတွေ ကိုသေချာနားထောင်ပါ။ လိုက်ပြောပါ။ အသံအနိမ့်အမြင့်အတက်အကျ
တွေကို ဂရုစိုက်ပါ။ ဥပမာ (Come ‘on ) နဲ့ “ (‘Come on) အဓိပ္ပါယ်မတူပါဘူး။ အသံအနိမ့် အမြင့်ကွာပါတယ်။အဓိပ္ပါယ်လဲကွာပါတယ်။ ပြီးရင်လိုက်ပြောပါ။ Speaking ရော Listening ရောတက်လာပါ လိမ့်မယ်။
Movieတွေကြောင့် ကျွန်တော့် Englishစာသိသိသာသာကြီးတိုးတက်လာခဲ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေချင်တဲ့စေတနာ သက်သက်ဖြင့်ရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ခြင်းဖြင့် သင့်အတွက် တစ်စုံတရာအကျိုးအမြတ်ရှိခဲ့ရင်
Credit: မိုးရှင်း (I.M.T)
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/24/2015 08:52:00 AM No comments:
Asthma ဆိုသော ဝေါဟာရမှာ ရှေးဂရိဘာသာစကားဖြစ်ပြီး၊ Panting or Short drawn breath(ခေါ်)တိုတောင်းလျှင်မြန်စွာ အ သက်ရှုခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဆိုတာ ဓာတ်မတဲ့ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တုန့် ပြန်မှုက အသက်ရှုလမ်းကြောင်းမှာ ပြသနာအကြီးကြီးဖြစ်စေပါတော့တယ်။ ကလေး/လူကြီး၊ ကျား/မ မရွေးဖြစ်တတ်ကာ၊ အများအားဖြင့် မိဘမျိုးရိုးဗီဇကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ညသန်းခေါင်(သို့ မဟုတ်)နံက်လင်းအားကြီး အချိန်တွေမှာ ရောဂါထလေ့ ရှိပြီး၊ ချွေးေ စး များထွက်ကာ တရွှီရွှီမြည်အသက်ရှူကျပ်ခြင်းကြောင့် အလွန်ပင်ပန်းလှသလို၊ ရောဂါ ခံစားနေရသူကိုကြည့်၍ ဘေးမှမြင်ရ/ကြားရ သူအဖို့ လည်း စိတ်မသက်သာလှပေ။ သတိပြုရှောင်ကြဉ်ရန်။
(၁) ရနံ့ စူးရှသော အစားအသောက်/ရေမွှေး/ပန့်း ရနံ တို့ က ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ကာ ပန်းနာရင်ကျပ်ထလာစေလို့ သတိနဲ့ ဆင် ခြင်နေထိုင်ပါ။
(၂) အေးမြတဲ့လေကို ရှူရှိုက် ရတဲ့အခါ ရောဂါပိုစေနိုင်၍ အေးတဲ့ရာသီမှာ နှာခေါင်း နှင့်
ပါးစပ်တို့ ကို ခေါင်းစည်း ပဝါနှင့် စည်းပတ်ထားပါ။
(၃) အမှိုက်ရွက်များမီးရှို့ ခြင်း(သို့ မဟုတ်)ထင်းနှင့်ချက်တဲ့ မီးဖိုဘေးမှာ မနေပါနှင့်။
(၄) စီးက ရက်အငွေ့က အသက်ရှူလမ်းကြောင်းများကို လှုံ့ ဆွပေးလို့ ဆေးလိပ်မသောက်ပါနှင့်(သို့ မဟုတ်)ဆေးလိပ်သောက်သူများနှင့် ဝေးဝေးနေပါ။
(၆) ပန်းနာရင်ကျပ်ရှိသူ၏ ၅% ခန့် မှာ အကိုက် အခဲပျောက်ဆေး(NSAIDS)များနှင့် ဓာတ်မတည့်ကြ၍ ထိုသူများအတွက် အက်စ်ပရင်မပါတဲ့ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သော Acetaminophen (Tyneno)ကိုသာ သုံးပါ။
(၃) အမှုန့်ကြိတ်ထောင်းထားသော နတ်ဆေးဂမုန်း ၂-ကျပ် သားကို ပျားရည် ၁ပုလင်း ရောစပ်မွှေ၍ ၃-ရက်နေလှန်းပါ၊ ထောပတ် ၂၀-ကျပ်သား ရောထည့်ပြီး နာနာမွှေကာ နောက်ထပ်
၄-ရက် နေဆက်လှန်းပေးပါ၊ စုစုပေါင်း ၇-ရက်တိတိနေလှန်းပြီးပါက၊ လ္ဘက်ရည်ဇွန်းနှင့် နံနက်-ည တစ်ဇွန်းကျ တနေ့ နှစ်ကြိမ်စား ပြီး ရေနွေးအဖန်ရည်သောက်ပေးပါ၊
(ဒုတိယရက်)နောက်တနေ့ သင်္ဘောမယ်ဇလီပွင့်ခြောက်ကို လ္ကက်ရည်ကြမ်းသောက်သကဲ့သို့ အကြမ်းပုဂံနှင့် ၅-လုံးခန့်သောက်ပါ။ အပွင့်ခြောက်မရရင် အပွင့်အစိုကို ပြုတ်၍ဖြစ်စေ၊ အရွက်နုကိုငပိနှင့်တို့ စား၍ဖြစ်စေ ၀မ်းသွားလောက် အောင်စားပါ(သလိပ်များဝမ်းနဲ့ အတူဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်)။ (တတိယရက်) ၀မ်းသွားပြီးနောက်တနေ့ မှာ အုန်းနှဲရွက်အစိုဖြစ်စေ၊ အခြောက ဖြစ်စေ ထန်းလျက်နှင့်ဆတူကြိတ်ပါ။
ဆီးဖြူသီးအရွယ်ခန့် လုံးပြီး နံက်-နေ့ -ည ၁လုံးစီသောက်ပါ။ (ဖော်ပြပါအစီအစဉ် အတိုင်း ဆေးပတ်လည်အောင် ၃-ရက်သောက်ပါ။ ရောဂါအထူအပါးအပေါ်မူတည်ကာ တချို့ က ၁ကြိမ်/တချို့ က ၃ကြိမ် ဆေးပတ်လည် အောင် သောက်ခြင်းဖြင့် ရောဂါအမြစ်ပြတ်ပျောက်သည်)
Credit: Daily Health Tips
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/24/2015 08:49:00 AM No comments: